Fepetran'ny serivisy | Zeevou
Fanodinana famandrihana mandeha ho azy
Vetting ho an'ny vahiny
Hafatra mandeha ho azy
Traikefa an'ny vahiny
Tranonkala famandrihana mivantana
Famandrihana tsy misy komisiona
Rohy azo antoka 3-D
Tatitra amin'ny fotoana tena izy
Fanarahana ny fandaniana
PMS toerana marobe
Fitantanana ny mpandraharaha
Fampisehoana vaovao ho avy tsy ho ela
Rohy famandrihana maimaimpoana an'i Google
Opayo Nataon'i Elavon
44 + (0) 800 955 3 966
Fepetran'ny serivisy Zeevou
Ireto fepetra momba ny serivisy ireto dia natao hanazavana ny adidinay amin'ny maha mpanome tolotra sy ny adidinao amin'ny maha mpanjifa anay.
Tongasoa eto Zeevou, serivisy fitantanana fitantanana kaontina an-tserasera sy manokana natokana indrindra ho an'ny orinasa kely. Ireto fepetra momba ny serivisy ireto dia natao hanazavana ny adidinay amin'ny maha mpanome tolotra sy ny adidinao amin'ny maha mpanjifa anay. Vakio tsara izy ireo.
Ireo fepetra ireo dia mamatotra ny fampiasana ny serivisy ary mihatra aminao hatramin'ny fotoana nanomezanao Zeevou fidirana amin'ny serivisy.
Ny serivisy dia hivoatra arakaraka ny hevitry ny mpampiasa. Ireo fepetra ireo dia tsy natao hamaliana ny fanontaniana rehetra na ny adiresy isaky ny olana natsangan'ny fampiasana ny serivisy. Zeevou dia manan-jo hanova ireo teny ireo amin'ny fotoana rehetra, mahomby amin'ny fandefasana ny teny novaina ary i Zeevou dia hiezaka mafy hampita ireo fanovana ireo Aminao amin'ny alàlan'ny mailaka na fampandrenesana amin'ny alàlan'ny tranokala. Azo inoana fa hiova fotoana ny Terms of Service. Adidinao ny miantoka ny famakianao, ny fahatakaranao ary ny fanekenao ireo fe-potoana farany hita ao amin'ny tranokala.
Indraindray Zeevou dia mety manova ny fifanarahana noho ny antony marim-pototra, toy ny fanatsarana ny fampiasa efa misy na ny fiasa na ny fampidirana fiasa na fiasa vaovao amin'ny serivisy, ny fampiharana ny fandrosoana amin'ny siansa sy ny haitao ary ny fanitsiana ara-teknika mety amin'ny serivisy, hiantohana ny fandidiana na ny fiarovana ny Serivisy, ary noho ny antony ara-dalàna na ara-dalàna. Rehefa manova ny fifanarahana i Zeevou dia hanome anao fampandrenesana mifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao izahay, ohatra: amin'ny fampandrenesana fampandrenesana malaza na fitadiavana ny fifanarahana ao anatin'ny serivisy na fandefasana mailaka aminao. Amin'ny tranga sasany dia hampandre anao mialoha i Zeevou ary ny fanohizanao ny serivisy aorian'ny fanovana natao dia ny fanekenao ny fanovana. Azafady mba alao antoka fa namaky tsara ny fanamarihana toy izany ianao. Raha tsy te hanohy hampiasa ny Serivisy ianao amin'ny alàlan'ny kinova vaovao amin'ny fifanarahana, dia azonao atao ny mampitsahatra ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay success@zeevou.com.
Zeevou dia hanao ezaka mety mba hitazomana ny serivisy hiasa. Na izany aza, ny fahasahiranana ara-teknika sasany, ny fikojakojana na ny fanandramana, na ny fanavaozana takiana mba hanehoana ny fiovan'ny lalàna mifandraika sy ny fepetra takian'ny lalàna, dia mety hiteraka fanelingelenana vonjimaika indraindray. Zeevou dia manana ny zony, indraindray ary amin'ny fotoana rehetra, hanovana na hampiatoana, fotoana fohy na maharitra, ny fiasa sy ny endri-javatra amin'ny serivisy, miaraka amin'ny fampandrenesana mialoha raha azo atao, izany rehetra izany dia tsy tompon'andraikitra aminao, afa-tsy izay voararan'ny lalàna, noho ny antony marim-pototra toa raha misy fanelingelenana tena izy, fanovana, na fampitsaharana ny serivisy na ny fiasa na ny endri-javatra misy azy, na mila manamboatra, mitazona na manatsara ireo fiasa na fiasa efa misy, na manampy fiasa na fiasa vaovao amin'ny Serivisy, na hampihatra fandrosoana amin'ny siansa sy teknolojia na miantoka ny fahafaha-miasa na ny fiarovana ny serivisy, ny antony ara-dalàna sy ara-dalàna.
Amin'ny fisoratana anarana hampiasa ny serivisy Ekenao fa namaky sy nahatakatra ireo teny ireo sy ny anay ianao politika fiarovana fiainan'olona (misy amin'ny https://zeevou.com/privacy-policy/) izay mamelatra ny fomba fanodinantsika angona manokana. Manaiky ihany koa ianao fa manana fahefana hiasa amin'ny anaran'ny olona ampiasanao ny serivisy. Ianao dia heverina fa nifanaraka tamin'ireto Terms ireto amin'ny anaran'ny orinasa iray ampiasanao ny serivisy.
dia midika hoe ireo fepetra momba ny serivisy ireo.
dia midika hoe ny sarany isam-bolana (tsy misy haba sy haba) aloanao araka ny fandaharam-potoana.
dia ahitana ny fampahalalana rehetra mifanakalo eo amin'ny roa tonta amin'ity fifanarahana ity, na amin'ny fomba an-tsoratra izany, amin'ny fomba elektronika na am-bava, ao anatin'izany ny Serivisy nefa tsy misy fampahalalana izay, na lasa, misy ampahibemaso ankoatry ny fanambarana tsy nahazoana alàlana avy amin'ny ankilany.
dia midika hoe misy data na atiny napetrakao na miaraka amin'ny fahefanao ao amin'ny tranokala.
dia midika hoe ny fampahalalana mifandraika amin'ny famandrihana sy ny faktiora napetraka ao amin'ny famandrihana Zeevou sy ny pejy faktiora ao amin'ny Website, na pejy hafa (s) amin'ny tranokala nampandrenesin'i Zeevou, izay mety havaozina na ovain'i Zeevou indraindray.
“Zo ara-tsaina ara-tsaina”
dia midika hoe misy patanty, mari-pamantarana, marika fanompoana, zon'ny mpamorona, zon'ny môraly, zon'ny mpamorona, fahalalàna ary zon'ireo fananana ara-tsaina na indostrialy hafa, na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao na voasoratra na tsia.
dia midika hoe ny serivisy fitantanana fandraisam-bahiny natao (azo ovaina na havaozina indraindray avy amin'i Zeevou) amin'ny alàlan'ny tranokala.
dia midika hoe ny Internet amin'ny sehatra zeeva.com na tranokala hafa ampiasain'i Zeevou.
dia midika hoe Zeevou Limited, nampidirina sy voasoratra anarana any Jersey ambanin'ny isa voasoratra anarana 132351 ao amin'ny 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands.
dia midika hoe olona na antity hafa, hafa noho ny Subscriber, izay mampiasa ny Serivisy miaraka amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlan'ny Mpisoratra anarana indraindray.
dia midika hoe ny olona izay misoratra anarana hampiasa ny Serivisy, ary, raha avelan'ny teny manodidina, dia misy ny antokon'olona misoratra anarana hampiasa ilay serivisy.
dia midika hoe ny Subscriber, ary izay mamela ny sahan-kevitra dia Mpampiasa Voasa. Ny "anao" dia misy dikany mifanaraka amin'izany.
dia midika hoe izay atiny ampidirinao na ampidininao ao amin'ny serivisy ary ampiasaina amin'ny tanjon'ny varotra na misolo tena ny vokatrao na serivisinao ao anatin'izany, saingy tsy ferana amin'ny sary, famaritana, zavatra ilaina ary tsikera.
2. Fampiasana lozisialy
Zeevou manome anao ny zonao hiditra sy hampiasa ny Serivisy amin'ny alàlan'ny tranokala miaraka amin'ireo andraikitry ny mpampiasa manokana azonao atao arakaraka ny karazana fisoratana anarana. Ity zony ity dia tsy miankina, tsy azo nafindra ary voafetra ary voafehin'ity fifanarahana ity. Manaiky ianao ary manaiky fa, miankina amin'ny fifanarahana an-tsoratra mifandraika amin'ny Subscriber sy ny mpampiasa nasaina, na ny lalàna mifandraika rehetra:
1. ny Subscriber dia mamaritra hoe iza no mpampiasa nasaina ary ny haavon'ny zon'ny mpampiasa miditra amin'ny fandaminana mifandraika amin'izany sy ny serivisy ananan'ny mpampiasa nasaina;
2. ny Subscriber dia tompon'andraikitra amin'ny fampiasan'ny mpampiasa nasaina ny serivisy mifandraika amin'ny fikambanan'izy ireo;
3. ny Subscriber dia mifehy ny haavon'ny fidiran'ny Mpampiasa nasaina amin'ny fikambanana mifandraika amin'ny serivisy sy ny serivisy amin'ny fotoana rehetra ary afaka manafoana na manova ny fidiran'ny Mpampiasa nasaina iray, na ny haavon'ny fidirana, amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny antony rehetra, amin'izany tranga izany na olona. hitsahatra tsy ho Mpampiasa nasaina na hanana ambaratonga fidirana hafa, arakaraka ny tranga misy;
4. raha misy ny fifanolanana eo amin'ny Mpanjifa sy ny mpampiasa nasaina mikasika ny fidirana amin'ny fikambanana na serivisy, ny Mpisoratra anarana dia manapa-kevitra hoe inona ny fidirana na ny haavon'ny fidirana amin'ny Data na serivisy mifandraika amin'izany izay ananan'ny mpampiasa nasaina, raha misy, ho an'ny Mpanjifa. fikambanana.
5. Zeevou dia manan-jo hamorona kaonty isaky ny mpampiasa nasaina ary mifandray amin'izy ireo mivantana. Ny Mpampiasa nasaina dia manan-jo hifandray amin'i Zeevou amin'ny maha Subscriber azy ary mety hifandray amin'ny fikambanana hafa izay mampiasa ny Serivisy ihany koa.
3. Ny adidinao
1. Adidy amin'ny fandoavam-bola:
Zeevou dia miasa drafitra maimaimpoana sy fisoratana anarana karama. Raha tsy ao anatin'ny drafitra maimaimpoana ianao, an faktiora momba ny vidin'ny fidirana dia havoaka isam-bolana mifanaraka amin'ny antsipiriany voalaza ao amin'ny Fandaharam-potoana. Zeevou dia hanohy hisoratra anarana aminao mifanaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny fandoavambola mandra-pahataperan'ity fifanarahana ity mifanaraka amin'ny andininy faha-8.
Ny faktiora Zeevou rehetra dia halefa any aminao, na amin'ny Fifandraisana amin'ny faktiora izay omenao ny antsipirihany, amin'ny alàlan'ny mailaka. Ny fandoavana ny vola rehetra voalaza ao anaty faktiora dia tsy maintsy aloa arakaraka ny fandaharam-potoana. Tompon'andraikitra amin'ny fandoavana ny hetra sy ny haba rehetra ankoatran'ny frais Access.
Zeevou dia mety manova ny vidin'ny famandrihana karama, ao anatin'izany ny saram-pandrotsahana miverimberina, ny vanim-potoana alohan'ny karama (na fe-potoana mbola tsy voaloa), na ny kaody, indraindray ary hampahafantatra anao ny fanovana vidiny aminao mialoha ary, raha ilaina izany, ny fomba fanekena ireo fanovana ireo. Ny fiovan'ny vidiny dia hanomboka amin'ny fanombohan'ny vanim-potoana fisoratana manaraka aorian'ny datin'ny fiovan'ny vidiny. Miankina amin'ny lalàna azo ampiharina, Manaiky ny vidiny vaovao ianao amin'ny alàlan'ny fanohizanao ny fampiasana ny serivisy aorian'ny fiovan'ny vidiny. Raha tsy miombon-kevitra amin'ny fiovan'ny vidiny ianao, dia manan-jo handà ny fanovana amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana avy amin'ny fisoratana anarana Payam-pialana alohan'ny fanovana ny vidiny. Raha vao mihatra ny VAT dia manaiky ianao handoa izany eo ambonin'ny vidiny efa misy.
Raha misoratra anarana amin'ny fisoratana anarana misy karama ianao dia mety hanova ny sainao na tsy misy antony ary mahazo valiny feno amin'ny vola rehetra aloa ao anatin'ny telopolo (30) andro manomboka amin'ny andro fisoratana anarana ho an'ny serivisy mifandraika (ny "Cooling- off Period ") mifanaraka amin'ireto manaraka ireto:
Raha misoratra anarana amin'ny fizahan-toetra ianao dia manaiky fa ny vanim-potoana fampangatsiahana ho an'ny fisoratana anarana karama izay ahazoanao fitsapana dia manomboka efatra ambin'ny folo (14) andro aorian'ny hanombohanao ny fitsapana. Raha tsy foananao ny fisoratana anarana karama alohan'ny faran'ny vanim-potoana mangatsiaka dia very ny zonao hisintona ary hanome alalana an'i Zeevou handoa ho azy anao ny vidiny nifanarahana isam-bolana mandra-panafoanao ny fisoratana anarana aloa.
Raha mividy fisoratana anarana misy karama tsy misy fitsapana ianao dia manome alalana an'i Zeevou hanome vola anao ho azy isam-bolana mandra-panafoanao. Manaiky ianao fa ny vanim-potoana fampangatsiahana dia misy mandritra ny efatra ambin'ny folo (28) andro aorian'ny fividiananao nefa very indray mandeha ianao mampiasa ny serivisy mandritra io vanim-potoana io.
Raha mino ianao fa diso ny faktioran'i Zeevou anao dia tokony hifandray amin'i Zeevou ianao afaka 60 andro aorian'ny daty famaranana ny fanambarana faktiora voalohany nisehoan'ny lesoka na olana, mba hahazoanao fanitsiana na trosa. Ny fangatahana dia tokony hapetraka amin'ny ekipa Zeevou an'ny mpiara-miasa mahomby.
2. Vidiny na fihenam-bidy alefa:
Azonao atao indraindray ny omena vidiny manokana na fihenam-bidy amin'ny vidin'ny fidirana vokatry ny isan'ny fikambanana izay nampidirinao tao amin'ny serivisy na nampiana amin'ny fahefanao na vokatry ny fampiasanao ny serivisy ( fikambanan'ny '). Ny fahazoana manao izany vidiny manokana na fihenam-bidy izany dia miankina amin'ny fanekenao ny andraikitra amin'ny fandoavana ny vidin'ny fidirana rehetra mifandraika amin'ny fikambanananao rehetra. Raha tsy misy fitsarana an-tendrony ny zon'olombelona hafa mety hananan'i Zeevou eo ambanin'ireto fehezan-dalàna ireto na amin'ny lalàna, Zeevou dia manan-jo hamoaka faktiora ho an'ny Fandoavam-bola feno (tsy misy fihenam-bidy) noho ny fampiatoana na fampiatoana ny fampiasanao ny serivisy ho an'ny rehetra na rehetra an'ny fikambanananao raha toa ka tsy misy ny faktiora ho an'ireo saram-pidirana ireo dia andoavam-bola mifanaraka amin'ny fepetra takiana ao amin'ny Fandaharam-potoana.
Azontsika atao koa ny manolotra drafitra fampiroboroboana manokana, maha mpikambana, na serivisy, ao anatin'izany ny fanolorana vokatra sy serivisy an'ny antoko fahatelo miaraka na amin'ny alàlan'ny Serivisy. Tsy tompon'andraikitra amin'ny vokatra sy serivisy nomen'ny antoko fahatelo toy izany izahay. Izahay dia manan-jo hanova, hanafoana na hanitsy ny drafitry ny famandrihana natolotra sy ny fanoloran-tena amin'ny fotoana rehetra mifanaraka amin'ireo fepetra ireo.
Raha nividy na nahazo kaody, karatra fanomezana, tolotra efa voaloa mialoha ianao na tolotra hafa nomen'ny na tamin'ny anaran'ny Zeevou hahazoana fidirana amin'ny famandrihana karama ("Kaody"), dia misy fe-potoana sy fepetra samihafa natolotra anao miaraka amin'ny Ny kaody dia mety mihatra amin'ny fidiranao amin'ny serivisy ary manaiky ianao hanaraka ny fepetra sy fepetra toy izany. Azonao atao koa ny mividy ny fidirana amin'ny Subscription Paid amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo. Amin'ny tranga toy izany, ny fehezan-dalàna sy fepetra misaraka miaraka amin'ny antoko fahatelo toy izany ankoatry ny fifanarahana dia azo ampiharina amin'ny fidiranao amin'ny serivisy.
3. Adidy ankapobeny:
Ny serivisy sy ny tranokala irery ihany no tsy maintsy ampiasainao raha te hanana anton-draharaha anatiny ara-dalàna ianao, mifanaraka amin'ireo fepetra ireo sy izay fampandrenesana nalefan'i Zeevou na fepetra napetraka tao amin'ny tranokala. Azonao atao ny mampiasa ny serivisy sy tranokala amin'ny anaran'ny hafa na mba hanomezana tolotra ho an'ny hafa fa raha manao izany ianao dia mila miantoka fa nomena alalana hanao izany ianao ary ny olona rehetra omena na omena serivisy hanaraka sy hanaiky ny fepetra rehetra amin'ity fifanarahana ity izay mihatra aminao.
4. Fepetra fidirana:
1. Tokony ho azonao antoka fa ny anarany sy ny teny miafina rehetra ilaina hidirana amin'ny Serivisy dia voaro sy tsiambaratelo. Tsy maintsy ampandrenesinao avy hatrany i Zeevou momba ny fampiasana tsy ara-dalàna ny tenimiafinao na fanitsakitsahana fiarovana hafa ary hamerina ny tenimiafinao i Zeevou ary tsy maintsy mandray ny hetsika hafa rehetra izay heverin'i Zeevou fa ilaina hitehirizana na hanatsarana ny fiarovana ny rafitra fikirakirana Zeevou sy ny tambajotrao ary ny fidirana amin'ny Serivisy. Zeevou dia manan-jo handà ny fisoratana anarana na hanafoana ny teny miafina izay heveriny fa tsy mety.
2. Amin'ny maha fepetra ireto, rehefa miditra sy mampiasa ny serivisy ianao dia tokony:
i. tsy manandrana manimba ny filaminana na ny fahamendrehan'ireo rafitra fikirakirana Zeevou na tambajotram-pifandraisana na, izay iarahan'ny antoko fahatelo ny serivisy, ny rafitra sy ny tambajotram-pifandraisan'ny antoko fahatelo;
II. tsy mampiasa, na mampiasa diso ny Serivisy amin'ny fomba rehetra mety hanimba ny fiasan'ny Serivisy na tranokala, na rafitra hafa ampiasaina hanaterana ny Serivisy na hanimba ny fahafahan'ny mpampiasa hafa mampiasa ny Serivisy na tranokala;
III. tsy manandrana mahazo fidirana tsy ara-dalàna amin'ny fitaovana hafa ankoatr'izay nomenao alalana hiditra na amin'ny rafitry ny solosaina itobiana ny Serivisy;
IV. tsy mandefa, na miditra ao amin'ny tranokala, misy: fisie izay mety manimba ny fitaovan'ny computing olon-kafa na rindrambaiko, atiny mety manafintohina, na fitaovana na Data manitsakitsaka lalàna (ao anatin'izany ny Data na fitaovana hafa arovan'ny tsiambaratelo na tsiambaratelo momba ny varotra izay tsy zonao ampiasaina); ary
v. tsy manandrana manova, maka tahaka, mampifanaraka, mamerina, manafoana, manala na mamadika injenieran'ny programa solosaina rehetra ampiasaina hanaterana ny Serivisy na hampandehanana ny tranokala afa-tsy izay tena ilaina amin'ny fampiasana ny iray amin'izy ireo amin'ny asa mahazatra.
Na dia tsy adidin'i Zeevou aza ny manara-maso ny fampiasanao ireo serivisy, dia mety hanao izany i Zeevou ary mety mandrara ny fampiasana ireo Serivisy heveriny fa mety (na voalaza fa) ho fanitsakitsahana ireo voalaza etsy aloha.
5. Fepetra ampiasaina:
Ny fampiasana ny serivisy dia mety iharan'ny fetra, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny habetsaky ny angona azonao tahiry ao amin'ny lozisialin'i Zeevou, na ny isan'ny antso azonao avela hanoherana ny sehatr'asa fampiharana an'i Zeevou. Ny fetra rehetra toy izany dia holazaina.
6. Fepetran'ny fifandraisana:
Amin'ny maha fepetra an'ireo, raha mampiasa fitaovam-pifandraisana misy amin'ny tranokala ianao (toy ny forum, efitrano fandraisam-bahiny na ivon-kafatra), dia manaiky hampiasa fitaovana fampitaovana toy izany ianao ho an'ny tanjona ara-dalàna sy ara-dalàna. Tsy tokony hampiasa fitaovana fifandraisana toy izany ianao amin'ny famoahana na fanaparitahana fitaovana tsy misy ifandraisany amin'ny fampiasana ny Serivisy, ao anatin'izany (fa tsy ferana): tolotra entana na serivisy amidy, mailaka ara-barotra tsy misy fangatahana, fisie izay mety hanimba ny fifandraisan'ny olon-kafa fitaovana na rindrambaiko, atiny mety hanafintohina ny mpampiasa hafa ny Serivisy na ny tranokala, na fitaovana manitsakitsaka ny lalàna (ao anatin'izany ny fitaovana arovan'ny tsiambaratelo na tsiambaratelo momba ny varotra izay tsy azonao ampiasaina).
Rehefa manao fifandraisana amin'ny tranokala ianao dia maneho fa avelanao hanao izany fifandraisana izany. Zeevou dia tsy voatery miantoka fa ara-dalàna ny fifandraisana amin'ny tranokala na mifandraika amin'ny fampiasana ny Serivisy ihany. Toy ny amin'ny forum-tranonkala mifototra amin'ny tranonkala hafa, tsy maintsy mitandrina ianao rehefa mampiasa ny fitaovam-pifandraisana misy amin'ny tranokala. Na izany aza, Zeevou dia miaro ny zony hanala ny serasera amin'ny fotoana rehetra amin'ny fahaizany manokana.
Manome vola an'i Zeevou ianao amin'ny: ny fangatahana rehetra, ny vidiny, ny fahasimbana ary ny fatiantoka nateraky ny fandikana ny iray amin'ireto fehezan-dalàna ireto na ny adidy mety hanananao amin'i Zeevou, ao anatin'izany (fa tsy ferana) ny vidiny mifandraika amin'ny famerenana ny saram-pidirana rehetra izay mendrika fa mbola tsy naloanao.
4. Tsiambaratelo sy tsiambaratelo
Raha tsy hoe ny antoko mifandraika dia nahazo alalana an-tsoratra avy amin'ny iray hafa raha tsy hoe takian'ny lalàna hanao izany:
1. Ny ankolafy tsirairay dia hitahiry ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo iray hafa azo tamin'ireto fepetra ireto. Samy tsy hisy, na iza na iza, raha tsy efa nahazo alalana an-tsoratra avy amin'ny iray hafa, ny hampahafantatra na hanao izay tsiambaratelo momba ny tsiambaratelo azon'ny olona rehetra, na hampiasa izany ho tombontsoany manokana, ankoatry ny noeritreretin'ireto fehezan-teny ireto.
2. Ny adidin'ny antoko tsirairay amin'ity fehezan-dalàna ity dia haharitra amin'ny famaranana ireo fepetra ireo.
3. Ny fepetra voalazan'ny fehezan-dalàna 4.1.1 sy 4.1.2 dia tsy mihatra amin'ny fampahalalana izay:
i. dia na lasa fahalalàn'ny besinimaro hafa fa tsy ny fandikana ity andininy ity;
II. voaray avy amin'ny antoko fahatelo izay nahazo azy ara-dalàna ary tsy adidiny mametra ny famoahana azy;
III. dia eo am-pelatanan'ny antoko mandray nefa tsy misy fetra mifandraika amin'ny famoahana alohan'ny datin'ny fahazoana azy avy amin'ny antoko mpanazava; na
IV. dia mivoatra tsy miankina nefa tsy mahazo fampahalalana miafina.
Zeevou mitazona politikam-pahafahana manokana izay mamaritra ny adidin'ny antoko manoloana ny mombamomba anao. Tokony hamaky izany politika izany ao amin'ny zeevou.com/privacy-policy/ ary Ianao dia horaisina ho nanaiky izany politika izany rehefa hanaiky ireo fepetra ireo ianao.
Zeevou dia manome anao maodely azo ovaina momba ny Politika momba ny tsiambaratelo izay azonao ampiasaina amin'ny fikambanananao, ary ampidirina ho azy ao amin'ny tranonkala novokarin'i Zeevou ho anao izany. Amin'ny fisoratana anarana miaraka amin'i Zeevou, ianao dia miantoka fa ny maodely momba ny tsiambaratelo dia novakiana tanteraka ary nasiam-panitsiana tamin'ny zavatra ilainao, ary ekenao fa tsy manome torohevitra i Zeevou amin'ny fanomezana ity modely ity ary tsy azo raisina ho tompon'andraikitra amin'ny marina na ny fiantraikan'ny lalànao. fampiasana ny maodely. Manaiky ianao fa anjaranao irery ny miantoka ny fanananao Politika manokana momba ny tsiambaratelo ary izany dia taratry ny fizotran'ny asanao. Izay politika momba ny tsiambaratelo natsanganao dia tokony asio fehintsoratra ampy hampahafantarana amin'ny Vahiny anao ny fampahalalana zarainao amin'i Zeevou sy ny antoko fahatelo hafa.
5. Fananana ara-tsaina
Ny lohateny sy ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra ao amin'ny Serivisy, ny tranokala sy ny antontan-taratasy rehetra mifandraika amin'ny serivisy dia mijanona ho fananan'i Zeevou (na ireo manana fahazoan-dàlana).
Ny rindrambaiko Zeevou sy ny atiny dia tsy amidy na afindra aminao, ary i Zeevou sy ireo manana fahazoan-dàlana dia mitazona ny fananana ny kopian'ny fisie sy ny votoatin'ny rindrambaiko Zeevou na dia apetrakao amin'ny solosainao manokana, finday finday, takelaka, fitaovana azo ampiasaina, mpandahateny, sy / na fitaovana hafa.
Ny mari-pamantarana Zeevou, ny mariky ny serivisy, ny anaran'ny varotra, ny logo, ny anaran'ny habaka, ary ny endri-javatra hafa amin'ny marika Zeevou dia fananan'ny Zeevou na ireo manana fahazoan-dàlana. Ny fifanarahana dia tsy manome anao zon'olombelona hampiasa Zeevou Brand Features na amin'ny fampiasana ara-barotra na tsia.
2. Fananana angona:
Titre to, sy ny zon'ny fananana ara-tsaina rehetra ao, ny Data dia mijanona ho fanananao. Na izany aza, miankina amin'ny fandoavana feno ny Zeevou Access Fee ny fidiranao amin'ny Data rehefa tokony ho izy. Manome fahazoan-dàlana amin'i Zeevou ianao hampiasa, handika, hampita, hitahiry, ary hanohana ny mombamomba anao sy ny angon-drakitrao mba hahafahanao miditra sy hampiasa ny Serivisy ary ho an'ny tanjona hafa mifandraika amin'ny fanomezana serivisy ho anao.
Mampanantena ianao fa, raha ny momba ny atin'ny mpampiasa apetrakao ao amin'ny Zeevou, (1) Anananao na zonao ny mandefa izany atiny ho an'ny mpampiasa izany, ary (2) ny atin'ny mpampiasa toy izany, na ny fampiasan'i Zeevou araka ny noheverin'ny Fifanarahana, dia tsy manitsakitsaka ny fifanarahana na zon'olombelona hafa voalaza ao anatin'ny torolàlana ho an'ny mpampiasa, lalàna manan-kery, na fananana ara-tsaina, dokambarotra, toetranao, na zon'ny hafa na milaza fa misy fifandraisana na fanekena anao na ny atin'ny mpampiasa anao nataon'i Zeevou na mpanakanto rehetra , tarika, marika, orinasa na olona tsy misy fanekena an-tsoratra avy amin'i Zeevou na olona na orinasa toy izany.
Zeevou dia mety, saingy tsy manana adidy, manara-maso, mandinika na manitsy ny atin'ny Mpampiasa. Amin'ny tranga rehetra, Zeevou dia manan-jo hanala na hanafoana ny fidirana amin'ny atin'ny Mpampiasa amin'ny antony na tsy misy antony, ao anatin'izany ny atin'ny mpampiasa izay, amin'ny fahitan'i Zeevou irery, dia manitsakitsaka ny fifanarahana. Zeevou dia mety handray ireo hetsika ireo raha tsy efa nampandrenesina taminao mialoha na antoko fahatelo. Ny fanesorana na fanilihana ny fidirana amin'ny Votoatin'ny Mpampiasa dia miankina aminay irery, ary tsy mampanantena ny hanaisotra na hampiato ny fidirana amin'ny votoatin'ny mpampiasa manokana izahay.
Manome an'i Zeevou ianao tsy miankina, azo ampitaina, azo zahana fahazoan-dàlana, tsy misy mpanjaka, maharitra (na, amin'ny faritra tsy avela izany, mandritra ny fe-potoana mitovy amin'ny faharetan'ny Fifanarahana miampy roapolo (20) taona), tsy azo soloina, fahazoan-dàlana feno karama, eran'izao tontolo izao hampiasa, hamerina, hananana ho an'ny besinimaro (ohatra hoe manatanteraka na mampiseho), mamoaka, mandika, manova, mamorona sanganasa avy amin'ny, ary mizara izay atin'ny Mpampiasa anao mifandraika amin'ny serivisy amin'ny alàlan'ny fitaovana rehetra, na irery na miaraka amin'ny atiny hafa na fitaovana hafa, na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba hafa, fomba na teknolojia, na fantatra ankehitriny na avy izao noforonina. Ankoatry ny zony nomena manokana eto, dia mitazona ny tompona ny zonao rehetra ianao, ao anatin'izany ny zon'ny fananana ara-tsaina, ao amin'ny atin'ny Mpampiasa. Raha azo ampiharina sy ekena araka ny lalàna manan-kery, Manaiky ihany koa ianao hanafoana ary tsy hampihatra "zon'olombelona" na zon'ny mitovy aminy, toy ny zonao ho fantatra ho mpanoratra ny atin'ny mpampiasa rehetra, ao anatin'izany ny feedback, ary ny zonao hanohitra ny fanamavoana fitsaboana ny Atin'ny Mpampiasa toy izany.
Na eo aza ny mifanohitra amin'izay, Zeevou dia manana zon'ny manangona sy mamakafaka ireo angona sy fampahalalana hafa mifandraika amin'ny fanomezana, fampiasana ary fanatanterahana ny lafiny maro amin'ny Serivisy sy ny rafitra sy ny haitao mifandraika (ao anatin'izany, tsy misy fetra, fampahalalana momba ny angonao sy ny angona azonao avy eo), ary Zeevou dia ho afaka (mandritra sy aorian'ny fe-potoana voalaza eto) hampiasa (i) fampahalalana sy angon-drakitra toy izany hanatsarana sy hanatsarana ny Serivisy ary ho an'ny fampandrosoana hafa, tanjona diagnostika sy fanitsiana mifandraika amin'ny Serivisy sy ireo tolotra Zeevou hafa, ary (ii) mampiharihary izany antontan-kevitra izany amin'ny alàlan'ny fanangonana na endrika endrika voafaritra mifandraika amin'ny orinasany ihany. Tsy misy zony na fahazoan-dàlana omena afa-tsy izay voalaza mazava eto.
Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny atiny rehetra apetrakao. Zeevou dia tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny ary tsy manohana hevitra misy ao anaty atiny. Manaiky ianao fa raha misy mitaky fitakiana fanoherana an'i ZEEVOU mifandraika amin'ny fampiasana votoatiny izay nandefasanao, avy eo, tamin'ny fanekena mazava ho azy eo ambanin'ny lalàna eo an-toerana, dia tsy hampaninona anao izany ary hanenjika anao i ZEEVOU ary tsy hanohitra ny fahaverezana rehetra, ny fatiantoka ary ny fividianana. VIDIN'NY ATAORA FOTOTRA SY FIVAROTANA FANARAHANA) MITSANGA AMIN'NY FITIAVANA IZAO.
3. Famerenana data:
Tsy maintsy mitazona ny kopian'ny Data rehetra tafiditra ao anaty serivisy ianao. Zeevou dia manaraka ny politikany sy ny fomba fanao tsara indrindra hanakanana ny fahaverezan'ny angona, ao anatin'izany ny rafitra famerenana angon-drakitra isan'andro, saingy tsy manome antoka fa tsy hisy fatiantoka Data. Zeevou dia manilika mazava ny andraikitra amin'ny fahaverezan'ny data na inona na inona antony.
4. Fampiharana antoko fahatelo sy ny data-nao:
Raha mamela ny fangatahana antoko fahatelo hampiasaina miaraka amin'ny Serivisy ianao, dia ekenao fa Zeevou dia afaka mamela ireo mpamatsy ireo fangatahana antoko fahatelo ireo hiditra ao amin'ny Data-nao arak'izay takian'izy ireo amin'ny fampifanarahana ireo fangatahana antoko fahatelo miaraka amin'ny Serivisy. Zeevou dia tsy tompon'andraikitra amin'ny famoahana, fanovana na famafana ny angon-drakitrao vokatry ny fidirana toy izany avy amin'ireo mpamatsy fampiharana avy amin'ny antoko fahatelo.
6. Warranty sy fankasitrahana
Manome toky ianao fa rehefa nisoratra anarana hampiasa ny serivisy amin'ny anaran'ny olona iray hafa ianao, dia manana fahefana hanaiky ireo fepetra ireo amin'ny anaran'io olona io ary hanaiky fa amin'ny fisoratana anarana hampiasa ny serivisy hamatoranao ny olona izay itiavanao ny anarany. ny fanatanterahana ny adidy rehetra sy ny adidy rehetra izay nanjary iharan'ireto fepetra ireto, nefa tsy ferana ny adidinao manokana arak'ireto fepetra ireto.
Manaiky ianao fa:
1. Nahazo alalana hampiasa ny Serivisy sy ny Tranonkala ianao ary hiditra amin'ny fampahalalana sy angon-drakitra izay ampidirinao ao amin'ny tranokala, ao anatin'izany ny fampahalalana na fampidirana data ao amin'ilay tranokala na iza na iza nomenao alalana hampiasa ny serivisy. Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny fampahalalana voarindra sy angona izay azonao omena amin'ny alàlan'ny fampiasanao ny tranokala sy ny serivisy (na izany fampahalalana sy angona izany dia anao manokana na an'ny olon-kafa).
2. Zeevou dia tsy manana andraikitra amin'ny olona hafa ankoatranao ary tsy misy na inona na inona ato amin'ity fifanarahana ity manome, na mikasa ny hanome izany, tombony ho an'ny olona hafa ankoatranao. Raha mampiasa ny Serivisy ianao na miditra amin'ny tranokala amin'ny anaran'ny na ho tombontsoan'ny olon-kafa ankoatry ny tenanao (na orinasa iray na hafa) Manaiky ianao fa:
i. Tompon'andraikitra amin'ny fiantohana fa manan-jo hanao izany ianao;
II. Tompon'andraikitra amin'ny fanomezan-dàlana ny olona nomena fidirana amin'ny fampahalalana na angona ianao, ary Manaiky ianao fa Zeevou dia tsy manana adidy hanome olona miditra amin'ny torohay na Data raha tsy nomena alalana aminao ary mety hitarika anao hangataka vaovao aminao; ary
III. Hanonitra an'i Zeevou ianao raha tsy misy ny fitarainana na fatiantoka mifandraika amin'ny:
i. Ny fandavan'i Zeevou hanome ny olona rehetra fidirana amin'ny mombamomba anao na angon-drakitra mifanaraka amin'ireo fepetra ireo,
II. Zeevou dia manao fampahafantarana misy na Data ho an'izay olona manana alalana avy aminao.
3. Ny fanomezana, fidirana ary fampiasana ny, Serivisy dia miorina amin'ny fototra "as is" ary mety hitanao fa mety.
4. Zeevou dia tsy manome toky fa tsy ho tapaka na tsy hadisoana ny fampiasana ny serivisy. Ankoatra ny zavatra hafa, ny fiasa sy ny fisian'ny rafitra ampiasaina amin'ny fidirana amin'ny Serivisy, ao anatin'izany ny serivisy an-tariby ampahibemaso, ny tamba-jotra solosaina ary ny Internet, dia mety tsy ampoizina ary mety hanelingelina na hanakana ny fidirana amin'ny Serivisy indraindray. Zeevou dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fanelingelenana na fisorohana ny fahazoanao miditra na fampiasana ny Serivisy.
5. Zeevou dia tsy mpitana kaonty anao ary ny fampiasana ny modely fitantanana kaontim-bola izay atolotra ho ampahany amin'ny serivisy dia tsy misy ny fahazoana torohevitra momba ny kaonty. Raha manana fanontaniana momba ny kaonty ianao dia mifandraisa kaonty iray.
6. Anjaranao irery ny mamaritra fa mifanaraka amin'ny filan'ny Orinasanao ny serivisy ary mety amin'ny tanjona ampiasana azy ireo.
7. Ianao irery no tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ny lalàna momba ny kaonty, ny hetra ary ny lalàna hafa. Adidinao ny manamarina raha mitahiry ny lalàna momba anao (miaraka amin'ireo lalàna mitaky ny hitazomanao rakitra) ny fitahirizana sy ny fidirana amin'ny Data-nao amin'ny alàlan'ny lozisialy sy ny tranokala.
8. Tompon'andraikitra amin'ny fahazoana sy fitazonana izay fitaovana sy serivisy fanampiana ilaina hifandraisana, hiditra na hampiasana ny serivisy, ao anatin'izany, tsy misy fetra, modem, fitaovana, lozisialy, lozisialy, rafitra miasa, tambajotra, mpizara tranonkala sy ny toy izany. (miaraka, "Fitaovana"). Tompon'andraikitra amin'ny fitandroana ny filaminan'ny Fitaovana, Kaontinao, tenimiafinao (ao anatin'izany fa tsy ferana amin'ny teny miafina momba ny administratera sy ny mpampiasa) sy ny rakitra, ary ny fampiasana rehetra ny Kaontinao na ny Fitaovana misy na tsy misy ny fahalalanao na ny fanekenao.
9. Omenao zahay (1) hamela ny Serivisy hampiasa ny fikirakirana, ny fantsom-pifandraisana ary ny fitaovana fitahirizam-bokatra ao amin'ny Fitaovana misy anao hanamorana ny fiasan'ny Serivisy, (2) hanomezana doka sy fampahalalana hafa aminao, ary (3) mamela ny mpiara-miasa amintsika hanao toy izany. Amin'ny faritra rehetra amin'ny serivisy, ny atiny azonao idirana, ao anatin'izany ny fisafidianana azy sy ny fametrahana azy, dia mety hisy fiantraikany amin'ny fiheverana ara-barotra, anisan'izany ny fifanarahana nataon'i Zeevou tamin'ny antoko fahatelo.
10. Raha manome hevitra, hevitra na tolo-kevitra amin'i Zeevou mifandraika amin'ny serivisy ianao, dia ekenao fa tsy tsiambaratelo ny valiny ary manome alalana an'i Zeevou hampiasa an'io feedback io ianao raha tsy misy fameperana ary tsy andoavanao vola. Ny valiny dia heverina ho karazana Data.
11. Raha ampandrenesin'ny tompon'ny zon'ny mpamorona i Zeevou, amin'ny fampiasana ireo endrika natolotr'i Zeevou, fa misy ny atin'ny mpampiasa manitsakitsaka ny zon'ny mpamorona, dia azon'i Zeevou atao ny manaisotra ny atin'ny Mpampiasa ao amin'ny Serivisy, na manao dingana hafa heverin'i Zeevou fa mety, tsy misy fampandrenesana mialoha ho an'ny mpampiasa na antoko hafa izay nanome na nandefa an'io Atiny io. Raha toa ny mpampiasa na antoko iray hafa mino fa tsy manitsakitsaka ny atin'ny Mpampiasa dia azony atao amin'ny toe-javatra sasany ny mandefa fampandrenesana mifanohitra amin'i Zeevou miaraka amin'ny fangatahana hamerenana amin'ny laoniny ny atiny nesorina, izay azon'i Zeevou hajaina na mety tsy hainy, araka ny zon'i Zeevou irery ihany .
12. Amin'ny fanatonana fanampiana aminay amin'ny alàlan'ny fantsona rehetra misy ny kaontinao, dia ekenao fa manome anao zahay hiditra amin'ny kaontinao sy hiditra amin'ny angon-drakitrao feno ianao hanandrana sy hanampy anao amin'ny fangatahanao.
13. Zeevou dia avela hanao dokambarotra momba ny fampiasanao ny serivisy.
14. Izay angona vahiny izay ampidirinao ao amin'ny Serivisy anao na mivantana na amin'ny alàlan'ny rindrambaiko na rindrambaiko ampidirina ao amin'ny antoko fahatelo dia azon'i Zeevou ampiasaina amin'ny marketing. Ianao koa dia manome alalana an'i Zeevou hizara ny antsipiriany rehetra mifandraika amin'ireo Vahiny niditra tao amin'ny Serivisy tamin'ny Mpisoratra anarana hafa an'i Zeevou. Izay vahiny ampidirina amin'ny sehatra, dia mety ho lasa mpampiasa tsy miankina amin'ny Serivisy sy serivisy mifandraika atolotry ny mpiara-miasa amin'ny antoko fahatelo.
15. Raha mahazo fahazoan-dàlana hamafana na zon'ny famerenana amin'ny laoniny ny GDPR ianao na amin'ny vahininao dia takiana aminao ny hamaly azy ireo sy hiatrika ny fangatahany. Raha toa ka alefan'ny vahiny ny Zeevou iray na fangatahana zon'ny famerenana amin'ny laoniny dia manan-jo hanao fanovana, famafana na fanovana ilaina amin'ny angona vahiny notahirizina tao Zeevou ianao.
3. Tsy misy antoka:
Zeevou tsy manome antoka momba ny Serivisy. Raha tsy ferana ny voalaza teo aloha, Zeevou dia tsy manome toky fa hahatratra ny zavatra takinao ireo serivisy na mety amin'ny tanjona manokana. Mba hisorohana ny fisalasalana, ny fepetra na fiantohana voalaza rehetra dia esorina hatreto avelan'ny lalàna, ao anatin'izany (tsy misy fetra) ny fahazoana mivezivezy amin'ny varotra, ny tanjaky ny tanjona, ny anarana ary ny tsy fandikan-dalàna.
4. Manome toky ny mpanjifa:
Manome antoka ianao ary maneho fa manana ny zonao hiditra sy hampiasa ny Serivisy ho an'ny orinasa ary, araka izay ambaran'ny lalàna, dia misy antoka na lalàna mifehy ny mpanjifa arahin'asa hiarovana ny mpanjifa tsy miankina amin'ny faritra rehetra. tsy mihatra amin'ny famatsiana ny serivisy, ny tranokala na ireo fepetra ireo.
7. Mahasakana ny andraikitra
1. Hatramin'ny fetra farany avelan'ny lalàna, Zeevou dia manilika ny andraikitra rehetra sy andraikitra aminao (na olona hafa) amin'ny fifanarahana, fampijaliana (ao anatin'izany ny tsy fitandremana), na amin'ny fomba hafa, ho an'ny fatiantoka rehetra (ao anatin'izany ny fahaverezan'ny fampahalalana, ny angona, ny tombom-barotra ary ny tahiry ) na fahasimbana aterak'izany, mivantana na tsy mivantana, amin'ny fampiasana, na fiankinana amin'ny serivisy na tranokala.
2. Raha iharan'ny fahavoazana na fahasimbana ianao noho ny tsy fitandreman'i Zeevou na ny tsy fanarahanao ireo fehezan-dalàna ireo, ny fangatahana ataonao manohitra an'i Zeevou izay mipoitra avy amin'ny tsy fitandreman'i Zeevou na tsy fahombiazany dia ho voafetra raha ny tranga iray, na andiana tranga mifandraika amin'izany, amin'ny sandan'ny Access Access naloanao tao anatin'ny 12 volana lasa.
3. Raha tsy afa-po amin'ny serivisy ianao, ny vahaolana tokana sy tokana anao dia ny famaranana ireo fepetra ireo mifanaraka amin'ny andalana faha-8.
MANAIKY ANAO I ZEEVOU FA TSY MISY FITONDRANA NA FANERAN-TRANO AVY AMIN'NY FAMPIANARANA AMIN'NY FAMPIANARANA FIANARANA FAHATELO NA NY VOKANY IZAO NO AZONAO ATAO NA AMIN'NY fifandraisana amin'ny serivisy, ary raha ny fifandraisanao amin'ny fangatahana antoko fahatelo dia mitovy amin'i Garrison. , NY FITONDRANAO MANOKANA SY ETO MANARAKA, INDRINDRA NY ZEEVOU, AMIN'NY OLANA NA FAHASALEMANA AMIN'NY FAMPIANARANA FIANARANA FAHATELO NA NY VOKATENY IZAO, dia NY MAMPIASA NY ATAONY ARY ATAON'NY ATAON'NY FITSIPANAANA FAMPIANARANA FIVORIANA FAHATELO.
TSY MISY ZEEVOU, NY tompon'andraikitra, ny mpizara, ny mpiasa, ny AGENTS, ny DIRECTORS, ny SUBSIDIARIES, ny AFFILIATE, ny SUCCESSORS, ny ASSIGNS, ny mpamatsy, na ny LICENSORS dia tsy maintsy atao:
(1) INDRINDRA MAFY SA FAHAMARINANA (ANATREO TSY MISY TSY METY, MANOKANA, INCIDENTAL, PUNITIVE NA EXEMPLARY, RATSY) TSY AZON'ANDRIAMANITRA. MAFY SAFY NA RATRA INDRINDRA RAHA MBOLA MAHATSARA IZAO FA Hitranga IZAO RAHA RAHA, AMIN'NY FOTOANA NATAON'NY CONTACT, IZAO IZAHAY ARY Fantatrao fa mety;
(2) INDRINDRA: (A) FAHAMARINANA Fampiasa; (B) fahaverezan'ny daty; (C) fahaverezan'ny orinasa; (D) fahaverezan'ny tombony; NA (E) FAHASALAMANA AMIN'NY DEVICES, AMIN'NY EXTENTO AZONAO HANOROHANA NY FITSIPIKA INDRINDRA AMIN'NY FANARAHANA NY TORITENY MBA HANAO FAMPANDROSOANA NY SERVICES NA NY LOHATENY NA RATSIA INDRINDRA IZAO NO NAMPIANATRA ANAO FA TSY MAINTSY MOMBA NY FAMPIANARANA INDRINDRA. TENY FANAMPINY natolotray anay, amin'ny tranga rehetra nipoitra avy amin'ny fampiasana na tsy fahazoana miasa mba hampiasana ny serivisy, ny fitaovana, ny fangatahana antoko fahatelo, na ny votoatin'ny fangatahana antoko fahatelo, momba ny teôria ara-dalàna, tsy misy ifandraisany amin'i ZEEVOU OF THE PORO. Ireo fahasimbana ireo, ary na dia misy lesoka aza tsy mahomby amin'ny tanjon'ny tena izy;
(3) FAHAMARINANA MIARAKA AMIN'NY REHETRA REHETRA mifandraika amin'ny serivisy, fangatahana antoko fahatelo, na votoatin'ny fangatahana antoko fahatelo, mihoatra noho ireo vola naloanao tamin'ity fotoana ity. ZAOVOU mandritra ny volan-dRASOA ROA NY FANONTANIANA; OR
(4) FAMPANDROSOANA TSY FANOHANANA NA FANAMPINY TSY MAINTSY NA fanemorana ireo adidy nateraky ny fifanekena nateraky ny MAJEURE FORCE NA NA INDRINDRA IZAY TSY AZON'ANDRIAMANITRA SA TOA ZAN'NY ZEEVOU.
Tsy misy na inona na inona ao amin'ny fifanarahana manala na mametra ny andraikitr'i Zeevou noho ny fisolokiana, ny fanambarana diso, ny fahafatesany, na ny ratrany manokana vokatry ny tsy fitandremany, ary, raha takian'ny lalàna mihatra, ny tsy fitandremana.
Ity fizarana ity dia mihatra amin'ny lalàna feno azo ekena amin'ny lalàna mifehy. Azonao atao ny manana zon'olombelona eo ambanin'ny lalàna azo ampiharina amin'ny fitsaranao izay manome ho fanasitranana ankoatr'izay avoaka etsy ambony.
Ireo fifanarahana dia mbola hihatra aminao mandra-pikatonanao na i Zeevou. Na izany aza, ekenao ary ekenao fa ny fahazoan-dàlana maharitra mandrakizay nomena anao mifandraika amin'ny atin'ny mpampiasa, ao anatin'izany ny feedback, dia tsy azo ivalozana ary noho izany dia hitohy aorian'ny fandaniana na famaranana ny iray amin'ireo Fifanarahana na inona na inona antony. Zeevou dia mety hampitsahatra ny fifanarahana na hampiato ny fidiranao amin'ny serivisy amin'ny fotoana rehetra, ao anatin'izany ny fampiasanao ny serivisy tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna anao, ny tsy fanarahana ny fifanarahana, na raha esorinay ny serivisy (amin'izany no hanomezanay Mariho mialoha ny hanaovana izany). Raha mijanona ireo fifanarahana ianao na Zeevou, na raha mampiato ny fahafahanao miditra amin'ny serivisy i Zeevou dia manaiky ianao fa tsy hanana andraikitra na andraikitra aminao i Zeevou, ary i Zeevou dia tsy hamerina vola izay efa naloanao, amin'ny fetra farany avelan'ny lalàna mihatra. Azonao atao ny mamarana ny fifanarahana amin'ny fotoana rehetra. Ity fizarana ity dia hampiharina amin'ny alàlan'ny lalàna azo ampiharina.
1. Politika fitsapana
Rehefa nisoratra anarana voalohany hahazoana fidirana amin'ny serivisy ianao dia azonao atao ny manombatombana ny serivisy ao ambanin'ny fepetra fampiasa amin'ny fitsapana voafaritra, tsy mila manohy mampiasa ny serivisy. Raha misafidy ny hanohy hampiasa ny serivisy ianao aorian'izany, dia homena vola ianao rehefa ampidinao ao anaty serivisy ireo antsipirian'ny faktioranao, araka ny aseho amin'ny antsipiriany bebe kokoa ao amin'ny Fandaharam-potoana. Raha misafidy ny tsy hanohy hampiasa ny Serivisy ianao, Azonao atao ny mamafa ny fikambananao ao amin'ny faritra 'My Zeevou' ao amin'ny Serivisy. Zeevou dia mety manapa-kevitra ny fahazoanao manao fitsapana, ary manaisotra na manova ny fitsapana amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampandrenesana mialoha ary tsy misy tompon'andraikitra, araka izay voalazan'ny lalàna mihatra.
2. Famandrihana mialoha
Zeevou dia tsy hanome famerenam-bola raha mbola misy ny fotoana mialoha mialoha ho an'ny famandrihana Fandoavam-bola mialoha.
Raha nividy fisoratana anarana karama amin'ny alàlan'ny kaody ianao, dia hijanona ho azy ny famandrihanao amin'ny faran'ny vanim-potoana voalaza ao amin'ny fehezan-dalàna, na rehefa misy fifandanjana efa voaloa mialoha handoavana ny serivisy. Raha nividy ny fisoratana anarana naloanao tamina antoko fahatelo ianao dia tsy maintsy manafoana mivantana izany antoko fahatelo izany ianao.
3. Famaranana tsy misy tsiny:
Ireo fehezan-dalàna ireo dia hitohy mandritra ny vanim-potoana voararan'ny Fandoavam-bola aloa na aloa amin'ny fehezan-dalàna 3.1. Amin'ny faran'ny vanim-potoana faktiora tsirairay, ireto fepetra ireto dia hitohy mandritra ny vanim-potoana hafa mitovy amin'ny fe-potoana mitovy amin'izany, raha toa ka manohy mandoa ny saram-pidirana voatondro mifanaraka amin'ny fandaharam-potoana, raha tsy hoe samy manafoana ireo fepetra ireo ny roa tonta amin'ny fanomezana iray farafaharatsiny. fampandrenesana an-tsoratra mialoha ny volana alohan'ny faran'ny fe-potoana faktiora. Raha misafidy ny hanajanona ireo fepetra ireo ianao amin'ny fanomezana fampandrenesana an-tsoratra mialoha iray volana, dia afaka mandoa ny saram-pidirana mifandraika amin'izany ianao araka ny Fandaharam-potoana hatramin'ny faran'ny vanim-potoana faktiora farany voarakotry ny Fandaharam-potoana. Raha tsy nisy ny fandaharam-potoana fandoavam-bola, ary ny famandrihana nataonao dia fihodinana isam-bolana, ianao dia afaka mandoa pro-rata hatramin'ny faran'ny vanim-potoana fampandrenesana nomenao.
1. mandika ny iray amin'ireto fehezan-dalàna ireto ary aza manasitrana ny fanitsakitsahana ao anatin'ny 14 andro aorian'ny nahazoana ny fampandrenesana momba ny fanitsakitsahana raha toa ka azo ahitsy ny fanitsakitsahana;
2. mandika ny iray amin'ireto Terms ireto ary ny fanitsakitsahana dia tsy afaka amboarina (izay misy (tsy misy fetra) ny fanitsakitsahana ny andalana 3.4 na ny fandoavana ny saram-pidirana izay tsy voaloa ara-dalàna mifanaraka amin'ny fepetra takiana ao amin'ny sarany. fandaharam-potoana); na
3. ianao na ny orinasanao lasa tsy mahomby na mihodina ny orinasanao na manana mpandray na mpitantana voatendry amin'ny fananany rehetra na raha lasa tsy mahazaka vola ianao, na manao fandaharana miaraka amin'ireo mpampindram-bola anao, na iharan'ny trangan-javatra tsy miankina amin'ny orinasa. pahefana,
Zeevou dia afaka mandray an-tanana ny hetsika rehetra sa alalàn'ny azy manokana:
4. Atsaharo ity fifanarahana ity sy ny fampiasanao ny serivisy sy ny tranokala;
5. Miato mandritra ny fotoana voafaritra na tsy voafetra, ny fampiasanao ny serivisy sy ny tranokala;
6. mampiato na manajanona ny fidirana amin'ny Data na data rehetra.
7. Raiso ny iray amin'ireo hetsika ao amin'ny andininy faha-8 (d), (e) ary (f) an'ity andalana faha-4 (XNUMX) ity momba ny olona na olon-kafa rehetra nomenao alalana hiditra amin'ny mombamomba anao na ny angon-drakitrao.
Ho fisorohana ny fisalasalana, raha toa ka tsy misy ny fandoavana faktiora momba ny saram-pidirana mifandraika amin'ny fifandraisana amin'ny faktioranao, ny drafitra faktioranao na ny fikambanana misy anao (araka ny voafaritry ny andininy faha-3) mifanaraka amin'ny fepetra takiana ao amin'ny Fandaharam-potoana, Zeevou dia mety: hampiato na hampiato ny fampiasanao ny serivisy, ny fahefana hampiasana ny Sampandraharaha rehetra na misy anao amin'ny serivisy, na ny zonao hiditra amin'ny Data na Data rehetra.
5. Zo voaray:
Ny famaranana ireo fepetra ireo dia tsy misy fitsarana an-tendrony ny zon'ny sy ny adidin'ny ankolafy accrued hatramin'ny ary anisan'izany ny daty famaranana. Rehefa tapitra io fifanarahana io dia:
1. mijanona ho tompon'andraikitra amin'ny fiampangana sy sandam-bola voaangona izay aloa tokony aloa amin'ny fandoavana mialoha na aorian'ny famaranana; ary
2. mitsahatra avy hatrany amin'ny fampiasana ny Serivisy sy ny tranokala.
6. Tapitra na famaranana:
Andininy 3.1, 3.6, 4, 5, 6, 7, 8 ary 11 no tafavoaka velona amin'ny fahataperan'ireto fe-potoana ireto.
1. Olana ara-teknika:
Raha misy olana ara-teknika dia tsy maintsy manao ezaka araka ny antonony ianao hamotopotorana sy hamaritana ireo olana alohan'ny hifandraisana amin'i Zeevou. Raha mbola mila fanampiana ara-teknika ianao dia zahao azafady ny fanampiana atolotry Zeevou an-tserasera amin'ny tranokala na ny fandavanao izany mailaka izany aminay success@zeevou.com. Zeevou dia hampiasa ezaka azo ekena ara-barotra hamaly ny tapakilan'ny Helpdesk rehetra ao anatin'ny roa (2) andro fiasana.
2. Fahafahana misahana ny serivisy:
Na dia mikasa aza i Zeevou fa tokony hisy ora 24 isan'andro, fito andro isan-kerinandro ny Serivisy, dia mety hisy indraindray ny serivisy na tranokala tsy ahafahana mamela ny fikolokoloana na hetsika fampandrosoana hafa hatao.
Raha misy antony tsy tokony hanakantsakanan'i Zeevou ireo serivisy mandritra ny fotoana lava kokoa noho ny andrasan'i Zeevou dia hampiasa ezaka mety i Zeevou hamoaka mialoha ny antsipirian'ny hetsika toy izany amin'ny tranokala.
Ny serivisy dia misy 95%, refesina isam-bolana, tsy maningana ny fialantsasatra sy ny faran'ny herinandro ary ny fikojakojana voalahatra. Raha mangataka fikojakojana ianao mandritra ireo ora ireo, ny kajy amin'ny ora na fihenan'ny fotoana hampihenana ny fotoana voakasiky ny fikojakojana toy izany. Ankoatr'izay, ny fihenam-bidy rehetra ateraky ny fahatapahan'ny fifandraisana fahatelo na fitaovana hafa na antony hafa tsy voafehin'i Zeevou dia hesorina tsy ho isan'izany kajy izany. Ny vahaolana tokana sy tokana anao ary ny andraikitra ampanaovin'i Zeevou, mifandraika amin'ny fahazoana ny serivisy dia ny hoe isaky ny vanim-potoana fihenan'ny asa maharitra maharitra adiny roa dia hanome voninahitra anao i Zeevou 5% ny Fee fidirana isaky ny vanim-potoana 30 na minitra misimisy kokoa amin'ny fihenam-bidy; raha toa ka tsy mihoatra ny iray ny trosa toy izany dia hiakatra isan'andro. Hanomboka hiakatra ny fotoana tsy ampoizina raha vantany vao fantatrao (miaraka amin'ny fampandrenesana an'i Zeevou) fa misy ny fihenam-bidy ary mitohy mandra-piverin'ny fisian'ny Serivisy. Raha te hahazo fampindramam-bola amin'ny fotoana fohy ianao dia tokony hampandre Zeevou an-tsoratra ao anatin'ny 24 ora aorian'ny ora fihenam-bidy, ary ny tsy fanomezana izany fampandrenesana izany dia hahafoana ny zon'ny fahazoana trosa midina. Ny trosa toy izany dia tsy azo avotana amin'ny vola ary tsy tokony hitambatra mihoatra ny totalin'ny bola mandritra ny herinandro iray (1) amin'ny saram-panompoana amin'ny iray (1) volana amin'ny kalandrie raha misy tranga hafa. Zeevou dia hampiditra trosa fotsiny amin'ny volana nitrangan'ilay tranga. Ny fanakanana an'i Zeevou amin'ny fifandraisana data na serivisy hafa mifanaraka amin'ny politikany dia tsy azo heverina ho tsy fahombiazan'i Zeevou amin'ny fanomezana ambaratonga serivisy sahaza an'ity fifanarahana ity.
10. Fampiharana sy fitaovan'ny antoko fahatelo
Ny serivisy dia mifamatotra amin'ny na mety mifandray amin'ny rindranasa fahatelo, tranokala ary serivisy ("Fangatahana antoko fahatelo") sy Fitaovana antoko fahatelo hampiasana ny serivisy ho anao. Ireo Fampiharana sy Fitaovana Fahatelo Ireo dia mety manana ny fehezan-dalàna sy ny fampiasa ary ny politika momba ny tsiambaratelo ary ny fampiasanao ireo Fampiharana sy Fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo dia ho fehezin'ny lalàna sy fepetra ary politika momba ny fiainana manokana. Azonao tsara sy ekenao fa i Zeevou dia tsy manohana ary tsy tompon'andraikitra na tompon'andraikitra amin'ny fihetsika, endrika, na atiny na inona na inona Fampiharana na Fitaovana avy amin'ny antoko fahatelo na mety ho fifampiraharahana azonao ampidirina miaraka amin'ny mpamatsy ireo Fampiharana sy Fitaovana Fahatelo. Zeevou koa tsy manome antoka ny fampifanarahana na ny fitohizan'ny fampiharana ny antoko fahatelo sy ny fitaovana miaraka amin'ny serivisy.
1. Fifanarahana iray manontolo:
Raha misy antoko manafoana ny fandikana ireo fepetra ireo dia tsy midika izany fa fanilihana ny fandikan-dalàna hafa. Tsy misy fanafoanana hahomby raha tsy vita an-tsoratra.
Ny andaniny sy ny ankilany dia tsy tompon'andraikitra amin'ny faharetana na amin'ny tsy fahombiazan'ny fanatanterahana ny adidiny araka ireto fepetra ireto raha toa ka misy antony ivelan'ny fifehezana azy araka ny antonony izany fahatarana na tsy fahombiazana izany. Ity fehezan-dalàna ity dia tsy mihatra amin'ny adidy handoa vola.
4. Tsy misy andraikitra:
Tsy azonao atao ny manendry na mamindra zon'ny olona hafa raha tsy efa nahazo alalana tamin'ny alàlan'i Zeevou ianao.
5. Lalàna mifehy sy fahefana:
Raha mponina ao amin'ny hetra ianao any Etazonia na ny fampahalalana na angon-drakitra azonao ampidirina amin'ny alàlan'ny serivisy ary ny tranokala dia an'ny an'ny olona iray izay mponina ao amin'ny hetra any Etazonia amin'ny fotoana nekenao ireo ny fehezan-dalàna avy amin'ny State of California, USA dia mifehy ity fifanarahana ity ary i Zeevou sy ianao dia manaiky fa ny fizotran'ny vahaolana momba ny fifanolanana amerikana voalaza etsy ambany dia mihatra amin'ny fifanolanana rehetra mipoitra na mifandraika amin'ity fifanarahana ity na amin'ny fomba rehetra mifandraika amin'ny serivisy. VAKIO NY ASA ASA FITSARANA AMIN'NY ASA AMIN'NY FOMBA FITSABOANA NY ASA MOMBA NY FITSIPIKA NY TANINDRAZANA, HATRANY AMIN'NY FITSARANA NY JURY NA ASA ATAON'NY CLASS, ARY MAMETRAKA NY FITONDRANA AZO ATAO AMIN'NY ZAVA-MISY TSY MISY. Raha ny fampahalalana na angon-drakitra ampidirinao amin'ny alàlan'ny serivisy sy ny tranokala dia an'ny an'ny olona iray izay mponina ao amin'ny hetra any Nouvelle Zélande amin'ny fotoana anekenao ireo fepetra ireo dia ny lalàna any Nouvelle Zélande no mifehy ity fifanarahana ity ary manolotra anao amin'ny fahefana manokana ny tribonaly any Nouvelle Zélande noho ny fifanolanana rehetra nipoitra na nifandray tamin'ity fifanarahana ity. Raha ny fampahalalana na angona azonao ampidirina amin'ny alàlan'ny serivisy sy ny tranokala dia an'ny olona iray izay mponina ao Aostralia amin'ny fotoana anazanao ireo fepetra ireo dia ny lalàna aostralianina no mifehy ity fifanarahana ity ary manolotra ny fahefana manokana an'ny fitsarana any Aostralia noho ny fifanolanana rehetra nipoitra na nifandray tamin'ity fifanarahana ity. Amin'ny toe-javatra hafa rehetra, ity fifanarahana ity dia fehezin'ny lalàn'i Jersey ary ianao izao dia manolotra ny fahefana manokana an'ny fitsarana any Jersey amin'ny fifanolanana rehetra mipoitra na mifandraika amin'ity fifanarahana ity.
Raha misy ampaham-pizarana na fepetra voalaza ao amin'ireto fehezan-dalàna ireto dia tsy mety, tsy azo ampiharina na mifanipaka amin'ny lalàna, io ampahany na vatsy io dia soloina vatsy izay, araka izay tratra, dia mahatanteraka ny tanjona tany am-piandohana na ampahany. Ny ambiny amin'ity fifanarahana ity dia hamatotra ny antoko.
Ny fampandrenesana omena amin'ny alàlan'ireto Terms ireto na ny andaniny na ny ankilany dia tsy maintsy an-tsoratra amin'ny alàlan'ny mailaka ary heverina fa efa nomena tamin'ny fandefasana. Ny fampandrenesana an'i Zeevou dia tsy maintsy alefa fahombiazana@ zeevou.com na amin'ny adiresy mailaka hafa nampahafantarina tamin'ny alàlan'ny mailaka taminao tamin'i Zeevou. Ny fampandrenesana ho anao dia halefa any amin'ny adiresy mailaka nomenao rehefa nanamboatra ny fidiranao amin'ny serivisy na, raha manavao izany ianao avy eo, ny adiresy mailaka lehibe mifandray amin'ny kaontinao amin'ny fotoana namoahana fampandrenesana.
8. Fankatoavana Warranty:
AZO ATAO ARY MANAIKY FA NY FANOMPOANA dia omena "TOA" ARY "AZONAO AZONAO", TSY MISY FANAMPIANA NA FAMPANDROSOANA NA FAHAMARINANA. ZEEVOU ARY NY MPANJAKA REHETRA REHETRA TSY MISY REHETRA AZY ARY TSY MISY FANAMPINY NY FAHAMARINANA, FAHAMARINANA, FITNESS ho tanjona kendrena, na tsy fampidiram-bola. NA ZEEVOU NORA NA IZAY MANAN-DALANA VOLA AZO IZAO FA MAIMAIM-POANA NY SERVICE MALWARE NA KOMPONENT hafa mampidi-doza. Ho fanampin'izay, ZEEVOU TSY MITONDRA REPRESENTATION NA TSY AZO ATAO, ENDORSE, GARANTIE, NA RESPONSIBILITSITRAKA NY ASLAMIN'NY FAMPIANARANA FIVORIANA FIVORIANA (NA NY LOHATEN'IZANY), LOHATENY MOMBA NY MPIASA, DEVISY NA VOA VOA-JAVATRA VOASOROKOA AMIN'NY NA AMIN'NY SERVICE NA WEBSITE MISY HYPERLINKED, NA MIASA AMIN'NY BANNER NA ADVERTISING hafa ary ZEEVOU dia tsy tompon'andraikitra na azo ekena amin'ny fifanakalozana eo anelanelanao sy ireo mpamatsy antoko fahatelo.
TSY MISY Torohevitra na fampahalalana na am-bava na amin'ny fanoratana azonao avy amin'i ZEEVOU dia tokony hamorona fampanantenan-tena amin'ny fanjakan'i ZEEVOU. REHEFA Mampiasa ny serivisy ianao dia mety hanana ACCESS HAMPIASA TOETRA FANATSINANA Votoatiny, FA MBOLA MBOLA HANATSARANA NY TOETRAN'IZAO TONTOLO IZAO ETO AMIN'NY TOERANA ETO AMIN'NY TOERANA TOKONY TOA AZA AZO ATOKA AMIN'NY TOETRA TOKONY ITY hanivanana ny votoatin'ny EXPLICIT REHETRA.
TSY MISY FANDAMINAN'NY FAHORIANA, TSY MISY INTSONY ITY FIZARANA IZAO NO HETRAKA NY FANDAMINANA NY FAHAMARINANA ZEEVOU AMIN'NY TRANON'NY FAMPANDROSOANA TSY FANAMARIHANA TANY AMIN'NY FAMPIANARANA SADY AMIN'NY FITONDRANA MOMBA NY FANOMPOANA AN'NY FANJAKANA MATY. Ity fizarana ity dia mihatra amin'ny lalàna feno azo ekena amin'ny lalàna mifehy.
Ity fizarana ity dia tsy misy fiantraikany amin'ny zonao amin'ny maha-mpanjifa anao.
Zeevou dia afaka mamindra sy manome ny zony sy adidiny rehetra ao anatin'ity fifanarahana ity tsy misy fanekena. Ity fifanarahana ity dia fanambarana feno sy manokana momba ny fahazoan'ny roa tonta ary manala sy manafoana ny fifanarahana an-tsoratra sy am-bava teo aloha, ny fifandraisana ary ny fahatakarana hafa mifandraika amin'ny lohahevitr'ity fifanarahana ity, ary ny fanesorana sy fanovana rehetra dia tsy maintsy atao an-tsoratra. nosoniavin'ny roa tonta, afa-tsy izay voalaza ao anatiny. Tsy misy masoivoho, fiaraha-miasa, fiaraha-miombon'antoka, na asa noforonina vokatr'ity fifanarahana ity ary ny mpanjifa dia tsy manana fahefana na inona na inona hamatotra ny orinasa amin'ny lafiny rehetra.
10. Zon'ny antoko fahatelo:
Ny olona izay tsy antoko amin'ireto Terms ireto dia tsy manan-jo handray tombony amin'ny ambany na hampihatra izay fe-potoana misy ireo fepetra ireo.
11. Teny fanampiny ho an'ny Etazonia
Raha mpandoa hetra any Etazonia ianao na ny fampahalalana na angon-drakitra azonao ampidirina amin'ny alàlan'ny serivisy ary ny tranokala dia an'ny an'ny olona iray izay mponina ao amin'ny hetra any Etazonia, dia mihatra ireto teny manaraka ireto:
Zeevou dia tsy natao hampiasaina ho an'ny mpanjifa (izany hoe ampiasaina ho an'ny tena manokana, fianakaviana na tokantrano).
Dingana famahana ny fifanolanana any Etazonia
MBA VAKIO TSARA IZAO - MISY fiantraikany amin'ny zonao io.
Ity dingana manaraka ity dia mihatra amin'ny mponina ao amin'ny hetra any Etazonia, na raha ny fampahalalana na angona azonao amin'ny fampiasana ny serivisy sy ny tranokala dia an'ny olona iray izay mponina ao amin'ny hetra any Etazonia any amin'ny fotoana izay ekenao ireo fehezan-dalàna ireo na raha toa ianao ka mitady hamaha ny fifanolanana any Etazonia Raha toa ianao ka mponina ao amin'ny hetra any Etazonia na ny fampahalalana na angona azonao alefa amin'ny alàlan'ny Serivisy ary ny tranokala dia an'ny olona iray izay dia mpandoa hetra any Etazonia any Etazonia amin'ny fotoana anekenao ireo teny ireo, Manaiky an'i Zeevou ianao toy izao:
Ny ankamaroan'ny olan'ny mpanjifa dia voavaha haingana ary amin'ny fahafaham-pon'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny ekipa traikefa ho an'ny mpanjifa fahombiazana@ zeevou.com. AMIN'NY TRANO TSY MISY TSY MISY TSY MISY AZON'NY ekipanay mpahay siansa tsy afaka mamaly ny fangatahana azonao atao amin'ny fahafaham-po anao (NA raha tsy afaka namaha olana izahay, rehefa avy nanandrana nanao INFORMALY INDRINDRA), dia mifanaraka daholo ny vahaolana. IREO ADY IREO AMIN'NY ARBITRATION MAMORATRA NA NY FITSARANA MAIMAIM-POANA INSTEAD OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION. Tsy ara-dalàna kokoa ny fanelanelanana noho ny fitoriana eny amin'ny fitsarana. Ny arbitration dia mampiasa arbitrator tsy miandany fa tsy mpitsara na jury, mamela ny fahitana voafetra kokoa noho ny any amin'ny fitsarana, ary iharan'ny fitsaram-bahoaka voafetra ihany. Ny Arbitrators dia afaka manome ny onitra sy ny fanamaivanana mitovy amin'ny azon'ny fitsarana omena. IZAY ARBITRATION AO AMIN'NY Fifanarahana ity dia hipetraka amin'ny fototra iray isam-batan'olona; Mifanaraka amin'i ZEEVOU ianao fa tsy misy fahazoana alalana amin'ny kilasy sy fihetsika. Ho an'ny fangatahana tsy misy dikany izay tsy mihoatra ny $ 10,000, dia handoa ny sarany AAA, ny fitantanan-draharaha ary ny arbitrator ny Zeevou. Ankoatr'izay, amin'ny arbitration dia manan-jo hamerina ny saran'ny mpisolovava amin'i Zeevou ianao hatramin'ny farafaharatsiny izay hitiavanao azy any amin'ny fitsarana.
Azonao atao ihany koa ny mametraka fitoriana amin'ny sehatra an-tserasera hahazoana vahaolana hafa (ODR-platform). Azonao atao ny mahita ny sehatra ODR amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity: https: //ec.europa.eu/consumers/odr.
b. Dingana famahana ny fifanolanana any Etazonia.
NA INDRINDRA NA SAFITRA mifandraika amin'ny fomba rehetra amin'ny serivisy na ity fifanarahana ity dia hovahana amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lalàna, raha tsy amin'ny fitsarana, afa-tsy ny ahafahanao manamafy ny fangatahana any amin'ny tribonaly fitakiana kely raha toa ka mendrika ny fitakiana ataonao. Ny lalàna arbitration federal dia mifehy ny fandikana sy ny fampiharana an'io fepetra io; ny arbitrator dia hampihatra ny lalàna any California amin'ny raharaha hafa rehetra. Na eo aza ny zavatra mifanohitra amin'izany, ny ankolafy arbitration dia afaka mitady didy na endrika hafa fanampiana ara-drariny avy amin'ny tribonaly manana fahefana mahefa. Mifanaraka daholo isika fa ny tohan-kevitra sy ny adihevitra rehetra dia tokony hoentina ao amin'ny fahaiza-miaina isam-paritra fa tsy toy ny mpikamban'ny vondrona na vondrona ao anaty kilasy na solontena. AMIN'NY FIDIANANA AMIN'IZANY FANEKENA SY NY MANAIKY AMIN'NY ARBITRATION, Mifanaraka amin'i ZEEVOU ianao sy Zeevou dia samy manana ny zon'izy ireo hanome lalàna iray ary ny zon'ny mpitsara navoakan'i JURY. Ho fanampin'izay, Mifanaraka amin'i Zeevou ianao mba hanamboatra ny zony handray anjara amin'ny fihetsika iray kilasy na hametaveta amin'ny fototra iray malalaka. Mifanaraka amin'i Zeevou ianao fa manana mazava tsara sy nahalala nanamboatra ireo zonao ireo.
Mba hanombohana ny fizotran'ny arbitration dia mandefasa taratasy mangataka arbitration ary fariparito ny fitakianao Zeevou Limited, PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey, JE4 0ZE, Channel Islands. Ny Arbitration dia hotarihin'ny American Arbitration Association (AAA) alohan'ny mpanelanelana AAA tokana araky ny fitsipiky ny AAA, izay hita ao amin'ny www.adr.org na amin'ny fiantsoana 1-800-778-7879. Ny fandoavana ny saram-pandraharahana rehetra, ny fitantanan-draharaha ary ny arbitratoraly dia ho fehezin'ny lalànan'ny AAA. Ho fanampin'izany, i Zeevou dia hamerina ireo sarany sy sarany amin'ireo fitakiana izay mitentina latsaky ny $ 10,000 raha tsy hoe tapa-kevitra ny mpampanoa lalàna fa tsy misy dikany izany. Toy izany koa i Zeevou dia tsy hangataka ny saram-pandrika ho an'ny mpisolovava raha tsy tapa-kevitra ny arbitrator fa tsy misy dikany ny fangatahanao na ny fiarovanao. Miombon-kevitra amin'i Zeevou ianao fa mety misafidy ianao na Zeevou hanana ny fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny telefaona na mifototra amin'ny fandefasana an-tsoratra. Miombon-kevitra amin'i Zeevou ianao fa ny arbitration manokana dia hatao ao amin'ny faritany izay ipetrahanao na amin'ny toerana hafa ifanarahana. Miombon-kevitra amin'i Zeevou ianao fa ny fanapahan-kevitry ny arbitrator dia farany ary tsy hampiakarina, ary ny didim-pitsarana momba ny loka arbitration dia azo raisina ao amin'ny fitsarana izay manana fahefana amin'izany. Miombon-kevitra amin'i Zeevou ianao fa ny fizotry ny famahana ny fifanolanana amerikana dia haharitra aorian'ny famaranana, famaranana na famotsorana ity fifanarahana ity.
12. Mifandraisa aminay
Raha manana fanontaniana momba ny Serivisy na ny fifanarahana ianao dia mifandraisa azafady Zeevou Customer Service amin'ny fitsidihana ny fizarana About Us an'ny tranokalanay.
Misaotra anao namaky ny Terms. Manantena izahay fa mankafy Zeevou ianao!
Entity manao fifanarahana: Zeevou Limited
1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Channel Islands
© Zeevou Limited
Ity Addendum Controller-to-Controller ity ("CCA"), dia ampahany amin'ny Terms amin'ny Service, (ny "Fifanarahana") eo amin'i Zeevou Limited ("Zeevou") sy Ianao ("Customer"). Ireo mpifanaraka dia manaiky fa izy ireo dia samy Controller misaraka sy mahaleo tena amin'ny angona manokana. Ireo mpifanaraka dia tsy ary tsy hikirakira ny angon-drakitra tafiditra ho mpanara-maso iraisana. Ny ankolafy tsirairay avy dia tokony hanaja ny adidy ampiharina aminy ho Controller eo ambanin'ny GDPR, ary ny Antoko tsirairay avy dia samy tompon'andraikitra tsirairay amin'ny fanarahan-dalàna avy aminy.
1. DATA EEA PERonalaly
Ao amin'ity CCA ity:
"Tanjona nifanarahana": dia midika hoe ny fampiasana ny Serivisy Zeevou hotarihin'ny Mpanjifa (mifanaraka amin'ny Fifanarahana) araky ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra izay hanomezan'i Zeevou fidirana amin'ny angon-drakitra manokana zaraina (araka ny voafaritra etsy ambany) rehefa ampiasain'ny mpanjifa ny Serivisy Zeevou.
"Ny lalàna momba ny fiarovana ny angona": dia ny lalàna rehetra momba ny fiainana manokana sy ny fiarovana ny angon-drakitra ao anatin'izany ny General Data Protection Regulation ("GDPR") sy ny lalàna nasionaly fampiharana, lalàna ary lalàna faharoa ampiharina ao amin'ny Vondrona eropeana (sy ny Fanjakana Mitambatra raha tsy efa ampahany amin'ny Vondrona eropeana) mifandraika amin'ny fanodinana ny angon-drakitra manokana sy ny tsiambaratelon'ny serasera elektronika, araka ny fanitsiana, fanoloana na fanavaozana indraindray, ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny Torolàlana momba ny tsiambaratelo sy fifandraisana amin'ny fifandraisana elektronika (2002/58 / EC), ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo sy ny fifandraisana amin'ny fifandraisana elektrika (EC Directive) 2003 (SI 2003/2426), ary ny Data Protection Act 2018.
"Data manokana an'ny EU": midika hoe angon-drakitra manokana mifandraika amin'ny lohahevitra angon-drakitra hita ao amin'ny faritra ara-toekarena eropeana (ao anatin'izany ny Fanjakana Angletera hatramin'ny datin'ity CCA ity) namboarin'i Zeevou ho an'ny anaran'ny mpanjifa fotsiny ho an'ny tanjona hanomezana ny Zeevou Service.
"Mpandray nahazo alalana": midika hoe ny antoko amin'ny Fifanarahana sy ny mpampiasa.
"Data zaraina manokana": midika hoe angon-drakitra manokana nampidirina tao amin'ny Serivisy Zeevou nataon'i Zeevou ary zaraina amin'ny mpanjifa. Ho fisorohana ny fisalasalana, ny Data zaraina manokana dia tsy hampiditra ny Data manokana ho an'ny EU, angona ho an'ny mpampiasa, naoty na angona manokana hafa.
"Serivisy Zeevou": midika ny rindrambaiko fitantanana fandraisam-bahiny natolotr'i Zeevou ho an'ny Customer.
"User": midika hoe mpiasa na mpanolo-tsaina ny mpanjifa izay eo ambany fifehezan'ny mpanjifa ary mahazo alalana hampiasa ny Serivisy Zeevou mifanaraka amin'ny fe-potoana nifanarahana.
"Data an'ny mpampiasa": midika hoe Data manokana an'ny mpampiasa EU.
1.2 Fizarana data manokana. Ity fizarana 1 ity dia mamaritra ny fizarana fizarana data manokana avy amin'i Zeevou amin'i Customer ho mpanara-maso. Ny ankolafy tsirairay dia manaiky fa ny zana-data zaraina manokana dia zaraina ho an'ny tanjona nifanarahana fotsiny. Ny adidy sy adidy napetraka amin'i Zeevou ao amin'ity Fizarana 1 ity dia tsy mihatra amin'ny fanodinana rehetra ataon'ny Mpanjifa izay mihoatra ny tanjon'ny tanjona nifanarahana.
1.3 ny vokatry ny tsy fanarahana ny lalàna momba ny fiarovana ny angona. Ny ankolafy tsirairay avy dia tokony hanaja ny adidy rehetra napetraka tamina mpanara-maso araky ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra, ary ny fanitsakitsahana farany ny lalàna momba ny fiarovana ny angon-drakitra ataon'ny ankolafy iray, raha tsy voavaha ao anatin'ny dimy ambin'ny folo andro aorian'ny fampandrenesana an-tsoratra avy amin'ny ankilany, antoko hafa hamarana ny fifanarahana misy vokany eo noho eo.
1.4 Famindrana sisintany. Ireo antoko ireo dia miditra ao amin'ny Fehintsoratra mahazatra momba ny fifanarahana ho an'ny mpanara-maso izay nankatoavin'ny Vaomiera eropeana tamin'ny fanapaha-kevitra 2004/915 / EC, nametaka azy io ho Exhibit A (ny "SCCs") ary nanao ampahany tamin'ny fifanarahana iray manontolo.
1.5 Adidin'ny mpanjifa. Ny mpanjifa dia:
(i) manodina ny angona manokana zaraina ho an'ny tanjona nifanarahana fotsiny na (ii) miantoka fa manana ny fampandrenesana sy ny fanekena ilaina rehetra izy io mba ahafahan'ny fanodinana ara-dalàna ny angona manokana zaraina ho an'ny tanjona hafa ankoatry ny tanjona nifanarahana mifanaraka amin'ny angona Fitsipika momba ny fiarovana ary manaraka ny lalàna mifandraika rehetra mifandraika amin'ny fanodinana toy izany;
tsy manambara na mamela ny fidirana amin'ny angona manokana zaraina amin'ny olon-kafa ankoatry ny mpandray nahazo alalana;
miantoka fa ny Mpandray Fahazoan-dàlana rehetra dia iharan'ny adidy fifanarahana an-tsoratra (amin'ny raharahan'ny mpampiasa, raha toa ka azo apetraka amin'ny olona tsirairay izany adidy izany) momba ny Data zaraina manokana (ao anatin'izany ny adidy amin'ny tsiambaratelo) izay tsy latsa-danja noho ireo napetrak'i ity Fizarana 1;
miantoka fa nametraka fepetra ara-teknika sy ara-pandaminana sahaza azy io, nojerena sy nankatoavin'i Zeevou, raha angatahina ara-dalàna, mba hiarovana amin'ny fikirakirana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna ny angon-drakitry ny tena manokana sy amin'ny fahaverezana na fanimbana tsy nahy, na fanimbana, data manokana;
tsy hamindra ny angona manokana azonao avy any Zeevou ivelan'ny EEA raha tsy ny mpanjifa dia miantoka fa (i) ny famindrana dia any amin'ny firenena nankatoavin'ny Vaomiera Eoropeana satria manome fiarovana mifanaraka amin'ny Andininy 45 ao amin'ny GDPR (ii) misy fiarovana arak'izay ilaina mifanaraka amin'izany hatramin'ny andininy faha-46 an'ny GDPR; na (iii) ny iray amin'ireo fanesoana amin'ny toe-javatra manokana ao amin'ny Andininy 49 ao amin'ny GDPR dia mihatra amin'ny famindrana; ary
hamafa (manome fanamafisana an-tsoratra momba ny fandringanana) na avereno ny data manokana nozaraina sy ny kopian'ny Zeevou ao anatin'ny enim-polo (60) andro aorian'ny faran'ny fanomezana ny Serivisy Zeevou ho an'ny mpanjifa, ary / na amin'ny fotoana rehetra amin'ny fangatahan'i Zeevou raha tsy takian'i lalàna hitahiry ny angona manokana, ary mitarika avy hatrany ireo antoko fahatelo niarahan'ny mpanjifa nizara ny angon-drakitra manokana zaraina hamafana avy hatrany ireo angona manokana zaraina;
tsy manambara na mamoaka izay zana-data zaraina manokana ho valin'ny fangatahana fidirana lohahevitra data raha tsy misy consulting Zeevou aloha raha mety;
Ampahafantaro haingana an'i Zeevou ny momba ny fahazoana ny fangatahana fidirana lohahevitra angon-drakitra mifanaraka amin'ny Toko III an'ny GDPR ("fangatahana fidirana lohahevitra");
mampahafantatra an'i Zeevou raha tsy misy fahatarana tsy ampoizina amin'ny fahafantarana ny fandikan-dalàna na fanitsakitsahana ny lalàna momba ny fiarovana ny angona, raha toa ka tsy azo adika ho fanekena ny hadisoana na andraikitra manoloana ny fandikan-dalàna na fandikan-dalàna toy izany ny fanomezana izany fampandrenesana izany; ary
mitazona rakitsoratra sy fampahalalana feno sy marina hanehoana ny fanajana an'io Fizarana 1 io.
1.6 Fanampiana. Ny ankolafy tsirairay avy dia hanampy ny iray hafa amin'ny fanarahana ny fepetra takiana amin'ny lalàna momba ny fiarovana ny angona mifandraika amin'ny angona zaraina manokana. Manokana, ny antoko tsirairay dia:
manome fanampiana ara-barotra ny ankolafy hafa amin'ny fanarahana ny fangatahana fidirana amin'ny lohahevitra; ary
manome ny fanampiana ara-barotra rehetra ho an'ny ankolafy hafa, amin'ny vidin'ny ankolafy hafa, amin'ny famaliana ny fangatahana avy amin'ny lohahevitra angon-drakitra sy ny fiantohana ny fanajana ny adidiny eo ambanin'ny lalàna momba ny fiarovana ny data momba ny fiarovana, ny fampandrenesana momba ny fandikana, ny fanombanana ny fiantraikany ary fakan-kevitra sy fangatahana avy amin'ny manampahefana mpanara-maso na mpanara-maso.
Zeevou dia manan-jo hitory anao amin'ny fanampiana atolotra anao amin'ny fanarahana ny fangatahana fidirana lohahevitra.
1.7 Fangatahana fidirana amin'ny lohahevitra. Raha mandefa fangatahana fidirana amin'ny lohahevitra amin'i Zeevou ny mpanjifa amin'ny fampahalalana nangonina sy notanan'ny Zeevou Serivisy an'ny mpanjifa, dia homena Zeevou amin'ny vidiny mirary ao anatin'ny 30 andro aorian'ny nahazoana ny fangatahana. Zeevou dia mety mitaky ny mpanjifa hanaraka dingana iray manokana haka ny angon-drakitra, ny antsipiriany izay ho azon'ny Zeevou omena ny mpanjifa amin'ny fotoana anaovana famotorana.
1.8 Data zarain'ny mpanjifa amin'ny serivisy Zeevou. Izay angona zarain'ny Mpanjifa amin'ny Serivisy Zeevou, toy ny saingy tsy ferana amin'ny fampahalalana momba ny famandrihana hosoka mety hitranga, dia azon'i Zeevou ampiasaina ary zaraina amin'ireo Host hafa mampiasa Serivisy Zeevou.
2. fanonerana. Ny mpanjifa dia handoa onitra, hiaro ary hihazona an'i Zeevou tsy maninona, ireo mpiara-miasa aminy, tompon'andraikitra, talen'ny asa aman-draharaha, mpiasa sy maso ivoho manoloana ny fitakiana, ny hetsika, ny fizotrany, ny fandaniana, ny fatiantoka, ny fahasimbana ary ny trosa (ao anatin'izany ny tsy famerana famotopotorana ataon'ny governemanta, fitarainana sy hetsika) ary mpisolovava mirindra. 'sarany mifandraika na mipoitra avy amin'ny fanitsakitsahan'ny mpanjifa an'io CCA io. Na eo aza ny zavatra mifanohitra amin'ny fifanarahana, ny adidy amin'ny mpanjifa arak'ity Fizarana 2 ity dia tsy iharan'ny fetran'ny andraikitra voalaza ao amin'ny fifanarahana.
3. Fampidirana. Ity CCA ity dia fanitsiana ny fifanarahana. Ity CCA ity, ao anatin'izany ny SCC, ary ny Fifanarahana dia mandrafitra ny fifanarahana sy ny fahazoan'ny antoko rehetra mikasika ny lohahevitra eto. Ny adidin'i Zeevou voarakitra ao amin'ity CCA ity dia iharan'ny fetran'ny andraikitra voalaza ao amin'ny fifanarahana. Ny adidy voatanisa ao amin'ity CCA ity dia miampy ireo adidy hafa ao anatin'ny Fifanarahana. Raha misy ny fifanolanana eo amin'ity CCA ity sy ireo fe-potoana hafa ao amin'ny fifanarahana dia hitantana ny fe-potoan'ity CCA ity. Ho fisorohana ny fisalasalana, raha toa ka manilika ny karazan-fampahalalana rehetra amin'ny fifanekena amin'ny tsiambaratelo ny fifanarahana, dia tsy mihatra amin'ny angona manokana an'ny EU izany fanilihana izany.
4. Fananganana. Amin'ity CCA ity, raha tsy hoe misy fikasana mifanohitra mazava hiseho: (a) izay tsy mifanaraka amin'ny teny manodidina, ny teny ampiasaina amin'izao vanim-potoana izao dia misy ny vanim-potoana ho avy sy ny mifamadika amin'izany ary ny teny amin'ny isa maro dia misy ny isa tokana ary ny mifamadika amin'izany; b) ny firesahana ny amin'ny olona rehetra dia misy mpandimby sy olona voatendry ho azy, fa raha azo ampiharina kosa dia raha tsy voararan'ity CCA ity ny mpandimby sy ny manendry azy; (c) ny firesahana ny amin'ny lahy sy ny vavy dia misy samy lahy na samy vavy; (d) ny firesahana ny fifanarahana rehetra, ny antontan-taratasy na ny fitaovana dia midika hoe fifanarahana, antontan-taratasy na fitaovana navaina na novaina ary manan-kery arakaraka ny fe-potoana voalaza ao anatiny ary misy ny addenda, fampirantiana ary fandaharam-potoana rehetra momba izany; (e) ny lohateny sy ny dikanteny ampiasaina ato amin'ity CCA ity dia ampiasaina amin'ny fanamorana fotsiny ary tsy tokony hodinihina amin'ny fandikana na fandikana ity CCA ity; (f) "eto," "eto", "hereeto", ary ny teny mitovy fanafarana dia heverina ho fanondroana an'io CCA io amin'ny ankapobeny fa tsy ny fizarana na ny ampahan'ny fizahana CCA ity; ary (g) "ampidirina" (ary misy dikany mifandraika, "ampidiro") dia midika hoe ampidirina tsy ferana ny ankapobeny ny famaritana mialoha io teny io.
Nohavaozina farany tamin'ny 31 Mey 2019.
Fehintsoratra fifanarahana mahazatra momba ny famindrana angona manokana avy amin'ny Vondron'olona mankany amin'ny firenena fahatelo (fanaraha-maso amin'ny famindrana maso)
Fifanarahana famindrana data
Zeevou, Inc. (manaraka izao dia “mpanondrana data”)
Mpanjifa (“mpanafatra data” eto)
ny tsirairay dia "fety"; miaraka "ny antoko".
Ho an'ny tanjon'ireo andalana:
"Data manokana", "sokajy manokana data / data sensitive", "process / processing", "Controller", "processeur", "subject data" ary "fahefana / fahefana mpanara-maso" dia mitovy hevitra amin'ny Directive 95 / 46 / EC tamin'ny 24 Oktobra 1995 (izay "fahefana" dia midika fahefan'ny fiarovana angon-drakitra mahefa ao amin'ny faritany nametrahana ny mpanondrana data);
"Ny mpanondrana data" dia hidika ny mpanara-maso izay mamindra ny angona manokana;
“Ny mpanafatra angon-drakitra” dia midika hoe ny mpanara-maso manaiky hanaiky avy amin'ny angon-drakitra manokana momba ny fanondranana data ho an'ny fanodinana bebe kokoa mifanaraka amin'ny fehezan-dalàna ireo ary izay tsy iharan'ny rafitra firenena fahatelo miantoka fiarovana sahaza;
Ny "klazy" dia midika hoe ireo fehezan-dalàna nifanarahana ireo, izay antontan-taratasy tsy miankina izay tsy mampiditra fehezan-dalàna ara-barotra napetrak'ireo antoko eo ambanin'ny lamina ara-barotra samihafa.
Ny pitsopitsony momba ny famindrana (ary koa ny angon-drakitra manokana voarakitra) dia voalaza ao amin'ny Annex B, izay mamorona ampahany lehibe amin'ny andalana.
I. ADIDIN'NY EXPORTER-DATA
Ny mpandefa data dia manome alalana ary mandray andraikitra fa:
Ny angona manokana dia nangonina, namboarina ary nafindra nifanaraka tamin'ny lalàna mifandraika amin'ny mpanondrana data.
Nampiasainy ny ezaka natao mba hamaritana fa ny mpanafatra angon-drakitra dia afaka manefa ny adidiny ara-dalàna ao anatin'ireto fehezanteny ireto
Izy io dia hanome ny mpanafatra angon-drakitra, raha izany no angatahina, miaraka amin'ny kopian'ny lalàna momba ny fiarovana angon-drakitra mifandraika amin'izany na raha misy firesahana momba azy ireo (raha misy ifandraisany, ary tsy ampiarahina torohevitra ara-dalàna) an'ny firenena nananganana ilay mpanondrana data.
Hamaly ny fanontanina avy amin'ny lohahevitra angon-drakitra sy ny fahefana momba ny fanodinana ny angon-drakitra ataon'ny mpanafatra angon-drakitra, raha tsy efa nifanaraka ny roa tonta fa hamaly izany ny mpanafatra data, ary amin'izany dia mbola hamaly araka izay azo atao ihany ny mpanondrana data. miaraka amin'ny fampahalalana azo omena azy raha toa ka tsy vonona na tsy afaka mamaly ny mpanafatra data. Ny valiny dia hatao ao anatin'ny fotoana mety.
Izy io dia hametraka, amin'ny fangatahana, ny kopian'ny andalana amin'ireo lohahevitra angon-drakitra izay mahazo tombony amin'ny antoko fahatelo amin'ny fehezan-dalàna III, raha tsy hoe misy ny tsiambaratelo mifehy vaovao, ka izany dia mety hanala izany vaovao izany. Raha esorina ny fampahalalana, ny mpanondrana angon-drakitra dia tokony hampahafantatra an-tsoratra an-tsoratra ny anton'izany fanesorana sy ny zon'izy ireo hisarika ny fanonganana ho eo amin'ny fahefana. Na izany aza, ny mpanondrana angon-drakitra dia tokony hanaraka ny fanapaha-kevitry ny fahefana mikasika ny fahazoana miditra amin'ny lahatsoratra feno amin'ireo fehezan-dalàna, raha toa ka nanaiky hanaja ny tsiambaratelon'ny vaovao tsiambaratelo nesorina ireo lohahevitra. Ny mpanondrana angon-drakitra dia tokony hanome ny dika mitovy amin'ireo andalana ihany koa amin'ny fahefana ilaina.
II. ADIDIN'NY IMPORTER DATA
Ny mpanafatra data dia manome alalana fa:
Hisy fepetra ara-teknika sy fandaminana ilaina hiarovana ny angon-drakitra manokana manoloana ny fanimbana tsy nahy na tsy ara-dalàna na fahaverezana tsy nahy, fanovana, famoahana na fahazoan-dàlana tsy ara-dalàna, ary izay manome ambaratonga fiarovana mifanaraka amin'ny risika atolotry ny fanodinana sy ny toetoetran'ny ny angona harovana.
Hanana fombafomba napetraka izy io ka izay antoko fahatelo alefany hanana fidirana amin'ny angon-drakitra manokana, ao anatin'izany ny mpikirakira, dia hanaja sy hitandrina ny tsiambaratelo sy ny fiarovana ny angon-drakitra manokana. Izay olona miasa eo ambany fahefan'ny mpanafatra angon-drakitra, ao anatin'izany ny fikirakira angon-drakitra, dia tsy maintsy mandahatra ny angon-drakitra manokana raha tsy amin'ny torolàlana avy amin'ny mpanafatra data ihany. Ity fepetra ity dia tsy mihatra amin'ireo olona nahazo alalana na takian'ny lalàna na fitsipika hananana fidirana amin'ny angona manokana.
Tsy misy antony inoana, amin'ny fotoana hidirana ao amin'ireto fehezan-dalàna ireto, amin'ny fisian'ny lalàna eo an-toerana izay misy fiatraikany lehibe amin'ny fiantohana voalaza ao ambanin'ireto fehezan-dalàna ireto, ary hampahafantatra ny mpanondrana data (izay handalo izany fampandrenesana izany amin'ny manam-pahefana izay takiana) raha toa ka mahafantatra ny lalàna toy izany.
Hanodina ny angon-drakitra manokana ho an'ny tanjona voalaza ao amin'ny Annex B izy, ary manana fahefana ara-dalàna hanome ny antoka sy hanatanteraka ny fepetra napetraka ao amin'ireto fehezanteny ireto.
Ho fantany amin'ny mpanondrana angona ny teboka ifandraisany ao amin'ny fikambanany nomena fahefana hamaly ny fangatahana momba ny fanodinana ny angon-drakitra manokana, ary hiara-hiasa am-pahatokisana amin'ny mpanondrana data, ny lohahevitra momba ny angon-drakitra ary ny fahefana mikasika izany fangatahana rehetra izany ao anatin'ny fotoana mety . Raha toa ka rava ara-dalàna ny mpanondrana angon-drakitra, na raha nifanaraka izany ny roa tonta, dia handray andraikitra amin'ny fanarahana ny fepetra voalazan'ny andininy I (e) ny mpanafatra angon-drakitra.
Araka ny fangatahan'ny mpanondrana angon-drakitra dia hanome ny mpanondrana angon-drakitra porofo momba ny loharanom-bola ampy hanatanterahana ny andraikiny amin'ny fehezan-dalàna III (izay mety misy fiantohana fiantohana).
Raha misy fangatahana antonanton'ilay mpanondrana angon-drakitra, dia handefa ny tranony fanodinana data, rakitra ary antontan-taratasy ilaina amin'ny fanodinana hatramin'ny famerenana, fanaraha-maso ary / na fanamarinana avy amin'ny mpanondrana data (na masoivohom-panadihadiana tsy miankina na tsy mitanila, nofidian'ny data mpanondrana ary tsy notoherin'ny mpanafatra angon-drakitra) mba hamaritana ny fanarahan-dalàna sy ny fahazoan-dàlana amin'ireto fehezan-dalàna ireto, miaraka amin'ny fampandrenesana mety ary mandritra ny ora fiasana mahazatra. Ny fangatahana dia iharan'ny fanekena na fanekena ilaina avy amin'ny fahefana mpanara-maso na mpanara-maso ao amin'ny firenena misy ny mpanafatra angon-drakitra, izay fanekena na fankatoavana izay ezahan'ny mpanafatra angona hahazoana azy ara-potoana.
Hanodinana ny angon-drakitra manokana izy, amin'ny safidiny, mifanaraka amin'ireo fitsipika fanodinana data voalaza ao amin'ny Annex A.
Tsy hampahafantatra na hamindra ny angona manokana amin'ny mpanara-maso angona antoko fahatelo any ivelan'ny faritra ara-toekarena eropeana (EEA) izy io raha tsy mampandre ny momba ny fanondranana sy ny data.
ny mpanara-maso angona antoko fahatelo dia manodina ny angon-drakitra mifanaraka amin'ny fanapaha-kevitry ny Komisiona fa ny firenena fahatelo dia manome fiarovana sahaza, na
ny mpanara-maso angona fahatelo dia lasa nanao sonia an'ireo andininy ireo na fifanarahana famindrana data hafa nankatoavin'ny manam-pahefana mahefa ao amin'ny EU, na
nomena ny foto-kevitra toherina ny lohahevitra momba ny angon-drakitra, rehefa avy nampandrenesina ny tanjon'ny famindrana, ny sokajin'ireo mpandray sy ny zava-misy fa ireo firenena anaovana tahiry dia mety hanana fari-pitsipika fiarovana isan-karazany, na
mikasika ny famindrana data tahiry manara-penitra, ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia nanome fanekena tsy azo antoka momba ny famindrana
III. ZON'NY FAHARETANA SY Zon'ny antoko antoko fahatelo
Ny antoko tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny ankolafy hafa noho ny fahasimbana ateraky ny fandikana ireo andininy ireo. Ny andraikitra eo anelanelan'ny andaniny sy ny ankilany dia voafetra amin'ny fahasimbana nosedraina ihany. Voasazy manokana ny onitra fanasaziana (izany hoe ny sazy natao hanasaziana ny antoko noho ny fitondran-tenany mahamenatra). Ny ankolafy tsirairay dia tompon'andraikitra amin'ny zana-tahiry noho ny fahasimbana ateraky ny fanitsakitsahana ny zon'ny antoko fahatelo amin'ireo fehezan-dalàna ireo. Tsy misy fiantraikany amin'ny andraikitry ny mpanondrana angon-drakitra araka ny lalàna fiarovana izany.
Manaiky ny roa tonta fa ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia manan-jo hampihatra ny tombotsoan'ny antoko fahatelo ity fehintsoratra ity sy andalana I (b), I (d), I (e), II (a), II (c), II (d ), II (e), II (h), II (i), III (a), V, VI (d) ary VII manohitra ny mpanafatra angon-drakitra na ny mpanondrana angon-drakitra, noho ny fanitsakitsahana ny adidiny amin'ny fifanarahana. amin'ny angon-drakitra manokana ananany, ary ekeo ny fahefana hanatanterahana an'io tanjona io ao amin'ny firenena fananganana data. Amin'ny tranga misy ny fiampangana ny fanitsakitsahana nataon'ny mpanafatra angon-drakitra, ny lohahevitra angon-drakitra dia tsy maintsy mangataka amin'ilay mpanondrana data aloha mba handray fepetra mifanaraka amin'ny fampiharana ny zony amin'ny fanafarana data; raha toa ka tsy mandray izany hetsika izany ny mpanondrana tahiry ao anatin'ny vanim-potoana mety (izay ao anatin'ny toe-javatra mahazatra dia iray volana), dia mety hampihatra mivantana ny zony hanohitra ilay mpanafatra angon-drakitra avy hatrany ny lohahevitra. Ny lohahevitra iray momba ny angon-drakitra dia manan-jo hiroso amin'ny fanoherana mivantana ny mpanondrana data izay tsy nahomby tamin'ny ezaka natao mba hamaritana fa ny mpanafatra ny angon-drakitra dia afaka manefa ny adidiny ara-dalàna ao anatin'ireto fehezan-dalàna ireto (ny mpanondrana angon-drakitra dia manana enta-mavesatra hanaporofoana fa nitaky ezaka mitombina izany. ).
IV. LAL APNA azo ampiharina amin'ireo lahasa
Ireo fehezan-dalàna ireo dia hanjakan'ny lalàn'ny firenena nananganana ny mpanondrana angon-drakitra, ankoatry ny lalàna sy ny lalàna mifehy ny fanodinana ny angon-drakitra manokana avy amin'ny mpanafatra angon-drakitra ambanin'ny andininy II (h), izay mihatra raha tsy ka nofidian'ny mpanafatra angon-drakitra noho io fehezan-dalàna io.
V. Fanapahana ny adihevitra miaraka amin'ireo lohahevitra momba ny daty na ny fahefana
Raha misy ny fifanolanana na fitakiana atolotry ny lohahevitra angon-drakitra na ny fahefana momba ny fanodinana ny angon-drakitra manohitra ny roa tonta na roa tonta, dia hifampilaza ny roa tonta momba ny fifanolanana na fitakiana tahaka izany, ary hiara-miasa ny fametrahana azy ireo am-pilaminana amin'ny fomba ara-potoana.
Manaiky ny hamaly ny fomba fanelanelanana tsy misy ifandraisany amin'ny ankapobeny izay natomboky ny lohahevitra iray na ny fahefana ny antoko. Raha mandray anjara amin'ny fizotrany izy ireo dia azon'ny antoko atao atao ny mifidy izany hanao izany lavitra (toy ny an-telefaona na fitaovana elektronika hafa). Manaiky ihany koa ireo antoko handinika ny fandraisan'anjara amin'ny fizarana hafa, ny fanelanelanana na ny fizahana raharaha hafa momba ny fifanolanana.
Ny ankolafy tsirairay avy dia hanaiky ny fanapahan-kevitry ny fitsarana mahefa ao amin'ny firenena napetraky ny mpanondrana tahirin-kevitra na ny fahefana izay farany ary manohitra izay tsy ahazoana manao antso avo intsony.
Raha sendra manitsakitsaka ny adidiny ireo mpanafatra angon-drakitra ao anatin'ireto fehezan-dalàna ireto, dia mety hampiato vetivety ny famindrana data ho an'ny mpanafatra data mandra-panamboarana ny fandikan-dalàna na tapitra ny fifanarahana.
Raha toa ka:
ny famindrana angona manokana amin'ny mpanafatra angon-drakitra dia nampiato vonjimaika an'ny mpanondrana angona mandritra ny iray volana mahery mifanaraka amin'ny andalana (a);
ny fanarahan-dalàna ataon'ny mpanafatra data amin'ireo andininy ireo dia manimba ny adidy ara-dalàna na ara-dalàna ao amin'ny firenena fanafarana;
ny mpanafatra angon-drakitra dia manitsakitsaka be loatra na maharitra ny fahazoan-dàlana na fampanaovantena nomeny ao anatin'ireto fehezanteny ireto;
fanapahan-kevitra farany izay tsy misy fitarainana fanampiny azo atao amin'ny fitsarana mahefa amin'ny firenena nametrahan'ny mpanondrana data na ny lalàna mifehy ny fahefana fa nisy ny fanitsakitsahana ny andalana avy amin'ny mpanafatra angon-drakitra na ny mpanondrana data; na
misy fanangonan-tsonia natolotra ho an'ny fitantanan-draharaha na ny fanafoanana ny mpanafatra angon-drakitra, na amin'ny maha-izy azy izany na eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharahany, izay fanangonan-tsonia tsy nesorina tao anatin'ny vanim-potoana azo ampiharina noho izany fandroahana izany araka ny lalàna manan-kery; didiana mihodina no natao; ny mpandray dia tendrena hikarakara ny fananany rehetra; voatendry mpiambina amin'ny bankiropitra, raha toa ka olon-tokana ny mpanafatra data; fananganana an-tsitrapo ataon'ny orinasa no anombohany; na fisehoan-javatra mitovy amin'izany na amin'ny faritra aiza na aiza
avy eo ny mpanondrana angon-drakitra, tsy misy fanavakavahana ny zon'olombelona hafa mety hananany amin'ilay mpanafatra angon-drakitra, dia manan-jo hamarana ireo andalana ireo, ary amin'izany dia ampahafantaro ny fahefana izay takiana. Amin'ny tranga rakotry ny (i), (ii), na (iv) ambonin'ilay mpanafatra angon-drakitra dia mety hanafoana ireo andininy ireo ihany koa.
Na iza na iza antoko dia afaka manafoana ireo andininy ireo raha (i) misy fanapahan-kevitry ny fahombiazan'ny komisiona araka ny Andininy faha-25 (6) amin'ny torolàlana 95/46 / EC (na lahatsoratra hafa napetraka) navoaka mikasika ny firenena (na sehatra iray ao aminy) izay ny data dia nafindra sy nokarakarain'ny mpanafatra angona, na (ii) Ny torolàlana 95/46 / EC (na lahatsoratra hafa rehetra) dia mihatra mivantana amin'ny firenena toy izany.
Manaiky ny roa tonta fa ny famaranana ireo andininy ireo amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra misy ary na inona na inona antony (afa-tsy ny famaranana amin'ny fehezan-dalàna VI (c)) dia tsy madiodio amin'izy ireo amin'ny adidy sy / na ny fepetra araky ny fehezan-dalàna mikasika ny fanodinana ny nafindra ny angona manokana.
VII. FANASIHANA NY FITSIPIKA ITY
Ireo antoko dia mety tsy manova ireo andininy ireo afa-tsy ny manavao izay vaovao rehetra ao amin'ny Annex B, amin'izay izy ireo dia hampandre ny manam-pahefana raha ilaina izany. Tsy misakana ny ankolafy tsy hanampy fehezan-dalàna fanampiny raha ilaina izany.
VIII. FANAZAVANA NY TRANSFER
Ny antsipirian'ny famindrana sy ny angon-drakitra manokana dia voafaritra ao amin'ny Annex B. Manaiky ireo ankolafy fa ny Annex B dia mety misy fampahalalana tsiambaratelo momba ny asa izay tsy ho ambaran'izy ireo amin'ny ankolafy fahatelo, afa-tsy izay takian'ny lalàna na ho setrin'ny fitondrana mahefa na governemanta. masoivoho, na araka ny takiana amin'ny fehezan-teny I (e). Ireo antoko dia afaka manatanteraka annexes fanampiny hanarona ny famindrana fanampiny, izay hatolotra ny manam-pahefana izay takiana. Ny Annex B dia mety, amin'ny endriny hafa, dia voatendry handrakotra ireo famindrana maro.
PRINCIPLES PROCESSING DATA
1. Fepetra kendrena: ny data manokana dia azo alamina ary avy eo ampiasaina na ampitaina bebe kokoa raha tsy amin'ny tanjona voalaza ao amin'ny Annex B na omena alalàn'ny lohahevitra data.
2. Kalitaon'ny data sy ny fitoviana: ny angona manokana dia tsy maintsy marina sy, raha ilaina, tazomina hatrany. Ny angon-drakitra manokana dia tsy maintsy ho ampy, ilaina ary tsy be loatra mifandraika amin'ny tanjona namindrana azy ireo ary namboarina bebe kokoa.
3.Famaritana: ny lohahevitra momba ny angona dia tsy maintsy omena fampahalalana ilaina hiantohana ny fanodinana ara-drariny (toy ny fampahalalana momba ny tanjon'ny fikirakirana sy ny famindrana), raha tsy efa nomen'ny mpanondrana data izany.
4. Fiarovana sy tsiambaratelo: Ny fepetra fiarovana ara-teknika sy fandaminana dia tsy maintsy raisin'ilay mpanara-maso angon-drakitra izay mifanaraka amin'ny risika, toy ny fanoherana tsy nahy na tsy ara-dalàna na fahaverezana tsy nahy, fanovana, fanambarana tsy fahazoan-dàlana na fidirana, natolotry ny fanodinana. Izay olona miasa eo ambany fahefan'ny mpanara-maso angon-drakitra, ao anatin'izany ny processeur, dia tsy tokony handrindra ny angona afa-tsy amin'ny torolàlana avy amin'ny mpanara-maso angona.
5. Zon'ny fidirana, fanitsiana, famafana ary fanoherana: Araka ny voalaza ao amin'ny andininy faha-12 amin'ny torolàlana 95/46 / EC, ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia tsy maintsy omena, na mivantana na amin'ny alàlan'ny antoko fahatelo, miaraka amin'ny mombamomba azy ireo izay tazonin'ny fikambanana, afa-tsy ny fangatahana izay miharihary fanararaotana, mifototra amin'ny elanelam-potoana tsy mitombina na ny isan'izy ireo na ny toetrany miverimberina na rafitra, na izay tsy ilana fidirana araka ny lalàn'ny firenen'ny mpanondrana data. Raha nanome ny fankatoavana teo aloha ny fahefana dia tsy tokony omena ihany koa ny fidirana rehefa manao izany dia mety hanimba ny tombotsoan'ny mpanafatra angon-drakitra na fikambanana hafa mifandraika amin'ny mpanafatra angon-drakitra ary ny tombontsoa toy izany dia tsy fehezin'ny tombotsoany zon'olombelona sy fahalalahan'ny foto-kevitra. Ny loharanon'ny angon-drakitra manokana dia tsy mila fantarina raha tsy misy izany amin'ny alàlan'ny ezaky ny antonony, na amin'ny toerana hanitsakitsahana ny zon'ny olona hafa ankoatry ny tsirairay. Ny lohahevitra momba ny angona dia tsy maintsy afaka manana ny mombamomba azy ireo manitsy, manitsy, na mamafa izay tsy marina na voahodina manohitra ireo fitsipika ireo. Raha misy antony manery ny hisalasala ny amin'ny maha ara-dalàna ny fangatahana dia mety mitaky fanamarinana fanampiny ny fikambanana alohan'ny hirosoana amin'ny fanitsiana, fanitsiana na famafana. Ny fampandrenesana ny fanitsiana, fanitsiana na fanesorana ny antoko fahatelo izay nanambarana ny angona dia tsy mila atao raha toa ka misy ezaka tsy mifanaraka amin'izany. Ny lohahevitra iray momba ny angon-drakitra dia tsy maintsy afaka manohitra ny fanodinana ny angon-drakitra manokana mifandraika aminy ihany koa raha misy antony manerantany mifandraika amin'ny toe-javatra niainany manokana. Ny vesatry ny porofo amin'ny fandavana rehetra dia miankina amin'ny mpanafatra angon-drakitra, ary ny lohahevitra momba ny angon-drakitra dia mety manohitra hatrany ny fandavana eo anatrehan'ny fahefana.
6. Angon-drakitra mampihetsi-po: Ny mpanafatra angon-drakitra dia handray fepetra fanampiny (oh: mifandraika amin'ny fiarovana) arak'izay ilaina mba hiarovana ny angona saropady mifanaraka amin'ny adidiny ao amin'ny andalana II.
7. Data ampiasaina amin'ny tanjona ara-barotra: Raha eo am-panodinana ny angon-drakitra mba hividianana marketing mivantana, dia tokony hisy ny fomba mahomby mamela ny foto-kevitry ny angon-drakitra amin'ny fotoana rehetra "hiala" amin'ny fampiasana ny angon-drakitra ampiasaina amin'izany tanjona izany.
8. Fanapahan-kevitra mandeha ho azy: ho an'ny tanjona amin'izany, ny "fanapaha-kevitra mandeha ho azy" dia midika fanapaha-kevitry ny mpanondrana data na ny mpanafatra angon-drakitra izay mamokatra vokatra ara-dalàna momba ny foto-kevitra iray na misy fiatraikany lehibe amin'ny lohahevitra iray ary miorina amin'ny fanodinana mandeha ho azy ny angon-drakitra manokana kendrena manombatombana lafiny manokana mifandraika aminy, toy ny fahombiazany any am-piasana, fahamendrehana, fahamendrehana, fitondran-tena sns. Tsy tokony handray fanapahan-kevitra mandeha ho azy momba ny lohahevitra angon-drakitra ny mpanafatra data raha tsy rehefa:
(i) Ny fanapahan-kevitra toy izany dia raisin'ny mpanafatra angon-drakitra rehefa miditra na manao fifanarahana amin'ny lohahevitra momba ny angona, ary
(ii) (ny foto-kevitra momba ny angona dia omena fotoana ifanakalozana hevitra momba ny valin'ny fanapaha-kevitra mandeha ho azy miaraka amin'ny solontenan'ny antoko mandray izany fanapahan-kevitra izany na raha tsy izany dia hanao solontena amin'ireo antoko ireo.
b) raha tsy izany dia omen'ny lalàn'ny mpanondrana data.
FANAZAVANA NY TRANSFER
Lohahevitry ny angona
Ny angona manokana nafindra momba ny sokajy manaraka ireto lohahevitra ireto:
Ireto no antony namindrana azy:
Ho an'ny fanomezana ny Zeevou Service amin'ny alàlan'ny fanondranana data ho an'ny mpanafatra data.
Ny angona manokana nafindra miresaka momba ireto sokajy ireto:
Fampahalalana momba ny tena manokana (anarana, adiresy mailaka, nomeraon-telefaona, adiresy an-trano, miralenta, daty nahaterahana, sns.)
Navoakan'ny governemanta ny antontan-taratasy famantarana
Nomera fisoratana anarana fiara (toerana nanaovana famandrihana)
Fampahalalana momba ny takiana amin'ny trano fonenanao toy ny teti-bola, ny halavan'ny fijanonana ary ny karazan-trano
Fampahalalana momba ny geolocation
Ny fampahalalana momba ny fizahana dia nampitaina tamin'i Zeevou tamin'ny alàlan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny dokam-barotra na ireo mpiara-miasa
Fampahalalana momba ny fanadihadiana momba ny fampiasana ny serivisy sy ny fifandraisana amin'ny interface an'ny serivisy
Ireo angona manokana nafindra dia azo ampitaina amin'ireto mpandray ireto na sokajy mpandray ireto ihany:
Ny angona manokana nafindra mikasika ny sokajy manaraka ireto ny angona saro-pady:
Fampahalalana momba ny fisoratana anarana fiarovana ny fanondranana data
Fampahalalana ilaina fanampiny (fetra fitehirizana sy fampahalalana mifandraika hafa)
Rehefa tapitra ny fifanarahana, Zeevou dia manan-jo hitana kopian'ny tahirin-kevitra rehetra omena ny Zeevou Service an'ny Mpanjifa mandritra ny fotoana tsy voafetra. Miankina amin'ny mpanjifa nahavita ny adidiny rehetra tao anatin'ny fifanarahana, Zeevou dia hanome fanampiana ho an'ny mpanjifa amin'ny fanondranana ny angon-drakitra na famindrana izany amin'ny mpamatsy hafa ho takalon'ny fandoavam-bola fanampiny, izay hiankina amin'ny habetsaky ny asa tafiditra amin'ny fanomezana ny fampahalalana ilaina . Ity fanampiana ity dia azo atao hatramin'ny 30 andro manomboka amin'ny Datin'ny Famaranana.
Vonona ny hiaraka amin'i The
Revolisiona famandrihana mivantana?
Jereo ny horonan-tsaryinay
PMS misy toerana maro
Mpitantana Channel mahery
Fandraisana an-tanana tsy mifandray
te hijanona amin'ny loop?
Copyright © 2021 Zeevou | Zeevou Limited dia voasoratra anarana ao amin'ny 1st Floor Kensington Chambers, 46/50 Kensington Pl, St Helier JE4 0ZE, Jersey, Islands Islands misy isa voasoratra anarana 132351. Faly izahay manompo ireo mpampiantrano mpiara-miasa manerantany.
UK: +44 (0) 800 955 3 966 | Etazonia: +1 (0) 855 855 9789 | info@zeevou.com
Twitter Facebook Linkedin WhatsApp Instagram Pinterest fifandirana
politika fiarovana fiainan'olona | Terms amin'ny Service